အပြိုကွီးမခငျသကျ – My Blog
အပြိုကွီးမခငျသကျ ( စ / ဆုံး)
မိုးတှငျးကွီးမှာ ထူးထူးဆနျးဆနျး နတှေမြေား သာလို့၊ ပှငျ့လို့၊ ဈေးခွငျးကို စားပှဲပျေါ တငျလိုကျရငျး နဖူး၌ သီးနသေော ခြှေးစကျမြားကို သုတျလိုကျသညျ..။ ပွီး.. အခနျးထဲ ဝငျကာ ခြှေးစို အဝတျမြားကို တဈခုမကနျြ ခြှတျပဈလိုကျ၏။ ၃၈ လကျမ ဆိုကျကွီး ဘရာစီယာကို နမျးကွညျ့လိုကျတော့ ခြှေးစျောနံနပွေီ..။ အငျး ရခြေိုးရငျး လြှျောရအုံးမညျ..။ ခန်ဓာကိုယျ၌ တဈခုတညျးသာ ကနျြ တော့သညျ့ ဆပျစမိုငျနာ နီရဲရဲလေးကို ဒူးပငျ့၍ ခြှတျလိုကျသညျ..။ သူလညျး ခြှေးနံ့ရော ဟိုအနံ့ရော မှနျထူနလေပွေီ..။ တဘကျ တဈထညျကို တနျးပျေါမှ ယူကာ ကိုယျလုံးပျေါမှနျရှမှေ့ာ ရပျရငျး တစ်ကိုယ်လုံးကို သနျ့စငျလိုကျ၏။ မှနျခပျြရှမှေ့ာ ကိုယျလုံးပွညျ့ လုံးတီးပျေါနသေော မိမိ၏ ကိုယ်လုံးအလှကို ငေးမောရငျး တဈကိုယျတညျး ပီတိ တှေ ဖွာနမေိသေး၏။ ကိုယ်ကို ဘယျလှညျ့ညာလှညျ့၊ သမငျလညျပွနျလှညျ့ အလှညျ့မြိုးစုံဖွငျ့ ကွညျ့၍ အားရကာမှ ခြှေးစုပျမညျ့ စပို့ရှပျ လကျတိုနှငျ့ တှရေ့ာ ထမီတဈထညျကို ကောကျ ဝတျလိုကျသညျ..။ ထို့နောကျ မီးဖိုခြောငျသို့ ဝငျလာခဲ့လိုကျသညျ..။
ခွငျးထဲက ခကျြပွုတျစရာတှကေို တဈခုခငျြး ခပြွီး ခုတျထဈစရာတှကေို ခုတျထဈနခေိုကျ ရှပျရှကျ..ရှပျရှပျ ခွသေံမြားနှငျ့အတူ အပြိုကွီး.အပြိုကွီးရေ ဟု ကယျြလောငျ ကယျြလောငျ အသံပေး၍ ဒျေါနီမာ ဝငျလာသညျ..။ အျောဘယျသူလဲလို့ မမမာ.လာလေ ထိုငျ. သိလြှကျနှငျ့ ဧညျ့ဝတျစကားဆိုကာ ဖိတျချေါလိုကျသညျ..။ ဒျေါနီမာက ယောကျြားလုပျစာ ထိုငျစား၊ အတငျးပွော အိမျလညျ၊ ဒါသညျသာ သူမအလုပျ..။ အောငျသှယျက ဝါသနာ ကွီးလိုကျသေး..၊ အပြိုလေးအပြိုဖွနျးတှဆေို ဒျေါနီမာနှငျ့ ကွာကွာမနရေဲ..။ အောငျသှယျလုပျရငျလုပျ၊ မလုပျရငျ လငျကိစ်စ သားကိစ်စတှကေို တစ်တစ်ခွခွ မွိနျရယှေကျရေ ပွောတတျသညျ..။ ဝါသနာကွီးသော မွီးကောငျပေါကျမလေးတှကေတော့ ရှကျတတျသော အမူအယာဖွငျ့ ဒျေါနီမာ ပွောသော မစားရဝခမနျး ခွငျထောငျဇာတျလမျး တှကေို ဖုတျလှိုကျ ဖုတျလှိုကျနှငျ့ ရငျတခုနျခုနျ အာသာမပွေ နားထောငျခငျြတတျကွသညျ..။
ဒျေါနီမာက မခငျသကျဘေးမှ ဖငျထိုငျခုံ တစ်လုံးကို ဆှဲယူပွီး နံရံ၌ မှီကာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ထိုငျလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ သိလြှကျနှငျ့ ကွကျသားတှလေားဟု မေးလိုကျသေး၏။ ဟုတျတယျမမမာရေ ဒီနေ့ စနနေဆေို့တော့ သငျတနျးတကျနတေဲ့ ဆှဆှေတေို့ လာမှာမို့ ဟငျးကောငျးလေး ခကျြကြှေးခငျြလို့ ဆိုပါတော့. အျော.ဟုတျပါ့..၊ ကောငျးပါ့.၊ ဒါနဲ့ ထားအိလေးကော မတှပေ့ါလား ထားအိ သူ တို့ ကုမ်ပဏီကိစ်စနဲ့ မန်တလေးတဲ့..၊ အခုမနကျပဲ ထှကျသှားတယျလေ ဟငျ.ဒါဆို..အိမျမှာ အပြိုကွီး တဈယောကျတညျး ပေါ့ အငျး အပြိုကွီးတို့ပဲ ကောငျးတယျ..၊ လငျယူသားမှေး ကိစ်စလဲ မလုပျမရှုတျတော့ဘူး..၊ ကိုယျ့ဘာသာ တဈယောကျတညျး လှတျလှတျလပျ လပျ နျော.. စားခငျြမှ ကိုယျကွိုကျသလို..ဟငျးဟငျး ဟု အကဲစမျးသညျ့အနဖွေငျ့ ဆိုလိုကျသညျ..။ အပြိုကွီး က ဘာမှ မပွောပဲ အောကျငုံ့၍ ခုတ်ထစ်စရာ အသားများကို သာ ရှေးရငျး ပွုံးနလေိုကျသညျ..။ အတှငျးခံမပါပဲ စပို့ရှပျ အိအိတိုတိုကိုသာ ဝတ်ထားသမို့ ရငျသားမြား အထငျးသား ပုံပျေါနကော အသားတုံးကို ခုတျလိုကျတိုငျး တုနျတုနျ .. တုနျတုနျနှငျ့ လှုပျခါနသေော မခငျသကျ၏ နို့ကွီး နှဈလုံးကို တဈခကျြကွညျ့ရငျး ဝါကြှတျတော့မယျနျော ဟု မဆီမဆိုငျ ဆိုလသေညျ..။ အပြိုကွီးက အငျး ဟု သံယောငျလိုကျ၏..။ အေးလေ အပြိုကွီးဘဝနဲ့ နတောပဲ ကောငျးတယျ မသကျရေ သိလား..၊ ယောငျလို့မြားတော့ လငျယူမယျ စိတျမကူးလနေဲ့ ဟငျး.မမမာက ကောငျးတာကြ ထညျ့မပွောဘူး..ခနျြထားတယျ..
ဒျေါနီမာ ဆငျသော အကှကျထဲသို့ တညျ့တညျ့ကွီး ဝငျလိုကျသညျ..။ ဒျေါနီမာက ခြောငျးတဈခကျြ ဟနျ့လိုကျကာ အေးလေ ကောငျးတာတော့ ကောငျးတာပေါ့..ဒါပမေယျ့ ခဏပါမသကျရယျ..၊ ကောငျးတာကတော့ မသကျလညျး အပြိုကွီးပမေယျ့ ဟငျး ဟငျး.. အလိုတျော မမမာနျော.ဟငျး သဘောပွောတာပါတျော၊ ခုကာလ အပြိုကွီး အပြိုကွီး ပေါငျလှနျကွညျ့ လီးရာခညျြးဆိုတဲ့ အ ထဲများ ကိုယျ့ညီမ ပါမလားလို့ပါ၊ ဘာပဲဖွဈဖွဈ မသက်ကိုမို့ ပွောရအုံးမယျ၊ ဒီမယျပါတော့ကော ဘာဖွဈသေးလဲ အေ..နျော၊ ဘယျသူ မှ မသိပွီးတာပဲဟာ..ကိုယ်တို့ကတော့ ရှငျးရှငျးပဲ ဒါမြိုးဆို လကျမနှေးထဲကပဲ၊ ကိုယ်တို့များ ဆိုလေ ဒီမယျဒီမယျ ဒါသာကွညျ့..(၁၄) နှဈ သမီးကထဲက အတှအေ့ကွုံ ရှိခဲ့တာ..ပွောပွောဆိုဆို သူ့ပေါငျကွား ပုတျပုတျပွသညျ..။
ဒျေါနီမာ၏ သဘာဝကို မကွိုကျလှသျောလညျး ဒီတဈခါတော့ အပြိုကွီးကိုယျနှိုကျက စိတျပါသလိုလိုမို့ သူပွောသမြှ မှေး၍ နားထောငျနလေိုကျသညျ..။ မသကျ ဘယ်လိုမှ တော့ မအောငျးမနေဲ့နျော.. မိနျးမခငျြး ကိုယျခငျြးစာလို့ ပွောတာ၊ မသကျ ဆန်ဒရှိရငျ ပွော..၊ မမမာက ပိုငျတယျ၊ ပိုငျတဲ့ ယောကျြားတှေ အမြားကွီး ငယျငယ်လား၊ ရှယျတူလား၊ ဦးဦးအရှယျလား၊ ပွော အပြျောလဲရတယျ၊ ရရှေညျလဲ ရတယျ.. ရညျရှယျထားရငျ လကျထပျခငျြလဲ ရတယျ သိလား ဟု တဈယောကျယောကျ ကွားသှားမညျကို စိုးရိမျဟနျဖွငျ့ အသံကို အုပျ၍ ပွောလသေညျ..။ ရပါတယျမမမာရဲ့ ဘာရပါတယျဟုတ်လား၊ အပြိုကွီး၊ ချေါခဲ့လို့ ရပါတယျလားဟငျ ဟုတျ ပါဘူး. မမမာရဲ့.. ဒီလိုပဲ နနေကေပြဲ ဥစ်စာ အဲဒါပွောတာပေါ့ မသက်တို့ ..အဲဒါတှေ ခက်တာ၊ ဒီမယျ .. မမမာကို မယုံလို့လား.. ဟုတျပါဘူး အေးဆေးပဲ နခေငျြလို့ ဖွဈရပွီ.. ဒီမယျ မသက်က အပြိုကွီးဆိုပမေယျ့ တကယျ့ကို လုံးကွီးပေါကျလှကွီးမို့ ကိုယ်တို့က ပွောတာ..၊ ဒီအတိုငျးကွီး ပဈထားလိုကျတော့မှာလား ၊ နှမြောစရာ. မခငျသကျက ဘေးသို့ စငျသှားသော ကွကျသားတုံးကို မမှီမကမျး လှမျး ဆှဲလိုကျရာ စောငျးလဲမလို ဖွဈသှားပွီးမှ ထိုငျခုံပျေါ ဖငျထိုငျရငျး ကနျြသော အသားတှကေို ခုတျနပွေနျသညျ..။
လဲမလိုလို ဖွဈသှားသောကွောငျ့ သူမ၏ ထမီက ဖရိုဖရဲ အနားစ ပုံပျကျသွားကာ ပွနျထိုငျလိုကျတော့ အောကျစလှတျ၍ နတေော့သညျ..။ လကျမှာလဲ ဟငျးကိုငျနခေိုကျမို့ ပပှေနသေညျ..။ ပွငျမထိုငျအား။ ဒျေါနီမာက ဟောငျးလောငျးကွီး ပျေါနသေော မခငျ သကျ ပေါငျခှကွားကို ကွညျ့ရငျး စိတျထဲက ပွုံးမိသညျ..။ မခငျသကျကတော့ သိဟန်မတူ..၊ သိလညျး မိနျးမခငျြးမို့ အရေးမကွီးသလို ဆကျနလေိုကျဟနျ တူပါရဲ့..။ ဝါဝငျးသော ပေါငျတှငျးသားနှဈဖကျကို အလငျးရောငျဖွငျ့ အထငျးသား မွငျနရေသညျ..။ စောကျဖုတျကို အပီအပွငျ မမွငျရသျောလညျး စောကျခုံနှငျ့ စောကျမှေးတှကေိုတော့ မဲမဲခြိတျခြိတျ လိမျလိမျရှုတျရှုတျကွီး တှနေ့ရေ သညျ..။ ဟငျးခကျြနရေငျး ဒျေါနီမာက စကားလုံးဖွငျ့ လာပွီး ဆှခဲ့သညျမို့ ကွုံဖူးခဲ့သော အဖွဈအပကျြတို့ကို တှေးမိရငျး မခငျသကျ တဈယောကျ တဈကိုယျတညျး ရငျဖိုနမေိရတော့သညျ..။
တစ်မနက်လုံး အခကျြအပွုတျ ကိစ်စမြားနှငျ့ နပမျးလုံးနရေသညျ..။ မီးဖိုခြောငျကိစ်စတှေ ပွီးသှားကာမှ လြှျောဖှပျစရာတှေ လြှျောဖှပျ၊ ရခြေိုးပွီး သနပျခါးလေး ဘာလေး လူးရနျ မှနျတငျခုံရှေ့ ထိုငျဖွဈရတော့သညျ..။ ရငျရှားထားသော ရစေိုထမီကို လဲလိုကျပွီး အခွောကျလဲလိုကျသညျ.။ ဝတျပွီးကာမှ ထမီကလညျး ကွဲထားတာ အကွီးကွီး..။ မတတျနိုငျ..၊ ဘယျသူရှိတာမှတ်လို့။ ထမီအကွဲကို လှညျ့ဝတျလို့လဲ မလုံ..၊ အကွဲက နှဈကှဲ၊ ရှပေို့တော့ နောကျက မလုံ၊ နောကျပို့တော့ ရှကေ့မလုံ၊ ကဲဟယျ..ဟု ဆိုကာ ရှနေ့ောကျ တ စ်ကွဲစီ ပို့ရငျး ရငျရှားလိုကျသညျ..။ ပွီး.. သနပျခါး သှေးလိုကျ၏။ မကျြနှာကို လူးပွီး ကိုယ်လုံးကို လူးရနျ ထမီစကို ဖွညျခလြိုကျသညျ..။
ဖှံ့ဖွိုးဝိုငျးစကျသော နို့ကွီးနှဈလုံးက ခနျ့ခနျ့ကွီး ပျေါလာ၏။ မှနျထဲမှာ ဖှေးဖှေးမို့မို့ကွီး ပွူထှကျနသေော ကိုယျ့နို့နှဈလုံးကို ငေးစိုကျ နရေငျးက ကြောကျပွငျပျေါမှ သနပျခါးကို လကျဝါးဖွငျ့ ပှတျ၍ ဆွဲလိုက်ကာ လကျမောငျးသား အိအိနှငျ့ ကြောပွငျ ဂုတျသားတှကေို လူးနခေိုကျ ရှပျရှပျ..ရှပျရှပျ ခွသေံက ပျေါလာပွနျ၏။ အငျး..မမမာတဈယောကျ ပွောရတာ အားမရသေးလို့ တဈခါလာပွနျပွီ ထငျ ပါရဲ့.. ဟု တှေးရငျး ကုနျသှားသော သနပျခါးအတှကျ နောကျတဈကြော့ သှေးလိုကျပွနျသညျ..။ ခွသေံက အခနျးဝ၌ ရပျသှား၏။ ထိုခွသေံသညျ မခငျသကျ ထငျထားသလို ဒျေါနီမာ၏ ခွသေံ မဟုတျဘဲ ပိုငျစိုး၏ ခွသေံဟု သိခဲ့လြှငျ မခငျသကျတဈယောကျ ဤသို့ ပရမျးပတာကွီး နမေညျ့ပုံ မပျေါပါ..။ ခုတော့ သူတို့နှဈယောကျ ကွုံရပွနျခပြွေီ..။ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ..။ ပိုငျစိုးသညျ အရငျ တဈခါ ကွုံခဲ့ဖူးသညျမို့ ဒီတဈခါ ဘာသံမှ မပေးတော့ဘဲ ဝငျလာခဲ့သညျ..။ စငျစဈ ပိုငျစိုး မရိုးသား၊ မရိုးသားခွငျးက ယခု ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဂုဏျပွုလပွေီဟု ဆိုရမညျလား မသိ၊ တံခါးဝသို့ ပိုငျစိုး အရောကျ မခငျသကျတဈယောကျ ခေါငျးကိုငုံ့၍ စိတျပါကျပါ သနပျခါး သှေးနသေညျ..။
အသံမပေးသေးဘဲ ထိုမွငျကှငျးကို ကွညျ့နမေိ၏။ ဒျေါခငျသကျက ရှကေို့သာ အားစိုကျပွီး သှေးနသေညျမို့ ပိုငျစိုး ရောကျနတော မသိ၊ သူမ၏ ထမီအကွဲထဲမှ မို့အဈ ပွူထှကျနသေော ညာဘကျခွမျး တငျသားဖှေးဖှေးကွီးနှငျ့ အားစိုကျ၍ ကုနျးသှေးလိုကျတိုငျး လှုပျလှုပျနသေော မှနျထဲမှတဆငျ့ မွငျရသော နို့ကွီးနှဈလုံးကို ပိုငျစိုး ငေးကွညျ့နရေငျး အာခေါငျမြား ခွောကျလာပါတော့သညျ..။ ခဏကွာမှ ဒျေါခငျသကျတဈယောကျ စိတျကူးဝငျသညျ..။ စောစောက ခွသေံကွားပါတယျဟု တှေးမိရငျး ခေါငျးကို ဆတ်ခနဲအမော့၊ မှနျရိပျထဲ ပျေါလာသော ပိုငျစိုး၏ မကျြနှာကို တှလေို့ကျရသညျ..။ မခငျသကျ ပွာပွာသလဲ ဖွဈသှားကာ ပေါငျရငျးအထိ လြှောကြ နသေော ထမီကို ကမနျးကတနျး ကောကျဝတျသညျ..။ သို့ပမေယျ့ ဖွဈသလိုကွီး။ မောငျ.မောငျ..ပိုငျစိုးဘယျ.ဘယ်တုံးက ဟု ပလုံး ပထွေး ရရှေတျသလိုကွီး မေးလိုကျရငျး ဒိနျးဒိနျးခုနျသှားသော ရငျကို ငွိမျသှားအောငျ ကွိုးစားရသညျ..။ ခုခုပဲ..ဒျေါအဲလေ မမ သကျဒီနေ့ ဆှဆှေေ့ သှားချေါရငျး လမျးလဲကွုံနတောနဲ့ ဒီဒီကို ဝငျလာတာပါ ဟု ပိုငျစိုးကလညျး အထဈထဈအငေါ့ငေါ့ ဆိုလေ သညျ..။
မခငျသကျတဈယောကျ ပိုငျစိုးရှေ့၌ မလုံမလဲ အဝတျဖွငျ့ ရငျခုနျလှုပျရှားနကော ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုငျရမှနျးပငျ မသိတတျအောငျ ဖွဈ နသေညျ..။ မောငျမောငျပိုငျစိုး အပွငျအပွငျ ကပဲ ခဏ.စောငျ့နျော. ဟု တုနျဟိုကျစှာ ဆိုသျောလညျး ပိုငျစိုးက မလှုပျ..၊ ကြောကျရုပျ။ သူမကိုသာ စူးစူးနဈနဈကွီး စိုကျကွညျ့နတေော့သညျ..။ ခငျသကျ ဗွုနျးကနဲ ရပျလိုကျမိသညျ။ ဒီတော့မှ သူ့ထမီက ကှဲ နတော သတိရပွီး ခုတငျခွရေငျး၌ လှားတငျထားသညျ့ ထမီတဈထညျကို ကုနျး၍ ဆှဲလိုကျရာ ကြောပွငျနှငျ့ နောကျပိုငျးတဈခုလုံး တငျးသှားပွီး တငျပါးနှဈခုကွားနှငျ့ တညျ့နသေော အကှဲစကွားမှ သှေးကွှစူအကျနသေော သူမစောကျဖုတျကွီးမှာ မို့ခုံးပွူထှကျလာ တော့သညျ..။ ပေါ့စလေိုလို့ ကွောငျရုပျထိုးကာမှ ဆေးအတှကျ လေးရလပွေီ.။ ပိုငျစိုး စိတျတှေ အရမျးလှုပျရှားနသေညျ..။ ရငျထဲ မှာ ပူကနဲ ဖွဈသှားကာ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘယ်လိုမှ မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ ခပျကုနျးကုနျးကွီး ဖွဈနသေော မခငျသကျရှိရာသို့ သှကျသှကျကွီး လှမျးသှားမိလေ၏။ သူမ ဆတ်ကနဲ မတျတတျအရပျ ပိုငျစိုးက နောကျမှ ဝငျ၍ အပှေ့၊ မခငျသကျ၏ နောကျမှ သိုငျး၍ ပှဖေ့ကျ ထားလိုကျမိသညျ.။ မထငျမှတျသော အဖွဈအပကျြမြားကွောငျ့ အပြိုကွီးလညျး ကွောငျသှားကာ ပိုငျစိုးကို တတောငျဖွငျ့ တှကျ လိုကျလသေညျ..။
အွတ်ကနဲ မွညျသှားပွီး သိုငျးထားသော လကျနှဈဖကျမှာ ပွကေသြှား၏။ ရငျခုနျတာရော စိတျဆိုးတာရော ပေါငျးပွီး အပြိုကွီးခမြာ တဆတျဆတျ တုနျနသေညျ..။ ပိုငျ.ပိုငျစိုးမငျး.မငျး. ဟု ဆိုကာ ပါးကိုရိုကျမညျဟု လကျကိုမွှောကျလိုကျပွီးကာမှ ဘယ်လိုက ဘယျလိုဖွဈသညျမသိ၊ မခငျသကျတဈယောကျ မကျြနှာကို လကျဝါးဖွငျ့ အုပ်ကာ ရှိုကျနပေါတော့သညျ.။ ပိုငျစိုးလညျး ပျာပျာသလဲ ဖွဈသှားကာ မမသကျကျ..ကနြျောကနြျော တောငျးပနျပါတယျ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာ ဘယျလိုမှနျး မသိ ဖွဈသှားလို့ပါ ကနြေျာ့အပွဈပါ မမသကျရယျ ကနြေျာ့ကို ရိုကျပါရိုကျလိုကျစမျးပါဗြာ. ပိုငျစိုးက မခငျသကျရှသေို့ တိုး၍ ပါးကို အပျလသေညျ။ တကယျတော့ အပြိုကွီးကိုယျတိုငျလညျး ဘာဖွဈ၍ ဘာဖွဈမှနျး သူကိုယျတိုငျ မသိ၊ သူ့ကိုလညျး မရိုကျရကျပါ..။ ရိုကျရနျလညျး မရညျရှယျပါ။ စိတျထဲမှာ ထူပူသှားပွီး အရှကျရော ရမ်မကျပါ ပေါငျးစပျမိပွီး ဒေါသဘကျသို့ ကူးသှားခွငျးသာ ဖွဈပါခြေ၏။
အတနျကွာမှ မခငျသကျ အငိုတိတ်ကာ စိတျဆိုးပွသှေားသညျ။ မခငျသကျက လကျထဲပါလာသော ထမီကို လဲ၍ ဝတျရနျပွငျပွီးမှ. မငျး ဟိုဘကျခနျး သှားနကှော.. ဟု ဆို၏။ ကွာ ဟူသော စကားလုံးကို မခငျသကျ တမငျတကာ သုံးလိုကျခွငျး ဖွဈ၏။ စိတျမဆိုး တော့ဘူး ဟူသညျ့သဘော၊ ချကျဆို နားခွက်က မီးတောကျသော ပိုငျစိုးက .. သွားဘူး ဟု ညုတုတု ဆိုလိုကျ၏။ ဒါဆို.. ဟိုဘကျလှညျ့ ဟု ဆိုတော့လညျး လှညျ့ဘူး တဲ့။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဈေးဆဈနကွေသညျ..။ စောစောက သူ့ကို ရိုကျမလို လုပျခဲ့တာ သူမ ပငျ မဟုတျတော့သလို မခငျသကျတဈယောကျ မပှငျ့တပှငျ့ ပွုံးကာ ထမီကို လဲလိုကျတော့သညျ..။ ရှပ်ကနဲ လှပ်ကနဲ ပှငျ့သှားသော ရငျသား အညှနျ့ဖှေးဖှေးကို မွငျဖွဈအောငျ မွငျလိုကျသော ပိုငျစိုးကလညျး ငါးဖယျပွုံး ပွုံးလို့.။ သွား. လူကို လိုကျကွညျ့နေ ဆှေ ဆှလောမှ နငျ့ယောကျြား နငျနိုငျအောငျထိနျးလို့ ပွောရအုံးမယျဟငျး ပိုငျစိုးက ဘာမှမပွောပဲ ရှသေို့ တိုးလာသညျ..။ တဈလှမျးနှဈ လှမျး မခငျသကျလညျး ဘာရယျမဟုတျ ဆုတျ ဆုတျပေးနမေိသညျ။ ခုတငျဘောငျနှငျ့ ထိသှားတော့ ဆကျဆုတ်လို့ မရတော့။ ပိုငျစိုးက မခငျသကျနှငျ့ ကပျသှားအောငျ မကျြနှာခငျြးဆိုငျလိုကျပွီး သူမ ပခုံးနှဈဖကျကို ဖွဖွ ဆုပျကိုငျလိုကျရငျး.
မမ.မ..သကျ ပိုငျစိုးက လှိုက်ဖိုစွာ ဆိုလိုကျ၏။ သွားသွားကွာ. မောငျပိုငျစိုး မလုပျနဲ့ ဖယျ.ဖယျ ပါ.. မခငျသကျက မောလြှသော အသံဖွငျ့ ရရှေတျရငျး လက်ကို ဖယျသျောလညျး လက်က ပွုတျမသှားပါခြေ..။ ပို၍ ပငျ တငျးကပျြသှား၏။ လူတှေ ဝငျလာရငျ မ ကောငျးဘူးကှာ. ဖယျပါပွီးတော့ မငျးက ငါ့တူမ ယောကျြားလေ၊ ပိုငျစိုး. ဒျေါဒျေါ တောငျးပနျပါတယျကှာ နျော လှတျနျော မခငျသကျ က အခြိုသတျကာ ငွငျး၏။ ပိုငျစိုးက နောကျမဆုတျပါခြေ။ သူမ၏ ကြောပွငျကို လကျပွောငျးပွီး ခပျတငျးတငျး ဆှဲယူလိုကျရာ မ ခငျသကျ၏ ရဆေေးငါးကွီးပမာ တဈလုံးတဈခဲနှငျ့ အိစကျနသေော မထိရက်စရာ ကိုယျလုံးကွီးကို ဖကျမိလြှကျသား ဖွဈရခပြွေီ..။ ပိုငျစိုး.မမသကျ ပွောနတေယျ..၊ ဒျေါလေး ပွောနတေယျနျော ဖယျပါလို့ဆို.. မသငျ့ပါဘူး..ဖယ်ကွာ ဒျေါလေးရော၊ ဒျေါဒျေါရော၊ မမ သကျရော ဝေါဟာရမြိုးစုံ သုံးကာ မခငျသကျ ရုနျးရှာပါသေး၏။ လှုပျခတျနသေော ရငျက တဒိုငျးဒိုငျး ခုနျနသေညျ။ ပွီးတော့ ပိုငျစိုး ရငျအုပျနှငျ့ ပိညှပျနတေော့ ရုနျး၍လညျး မလှယျပါတကား..။ ပိုငျစိုးက သူမ၏ ခါးနှငျ့ မို့ကားထှားအိသော တငျပါးကွီးနှဈဖကျကို ခပျ ကွမျးကွမျးလေး ဖိဆုပျနှိပျနယျရငျး. မမ.မ မသကျ ကနြေျာ့ကို စိတျဆိုးလားဟငျ ဟု မေးတော့..၊ အငျး ဟု တဈခှနျးသာ ဆိုရငျး ရုနျးကနျလိုကျပွနျသညျ။
ထိုသို့ ရုနျးမိကာမှ ခွမေခိုငျသလို ဖွဈပွီး ယိုငျကသြှားတော့သညျ.။ ပိုငျစိုးက အခှငျ့ကောငျးကို အလှတျမပေးဘဲ ယိုငျသှားသော မ ခငျသကျ ကိုယ်လုံးကို ခုတငျပျေါ လှဲသိပ်လိုက်ကာ သူမထကျသို့ တကျပွီး မှောကျလိုကျလသေညျ..။ သူမ မကျြနှာပျေါ အုပ်မိုးကာ ပါးပွငျနှဈ ဖကျကို အငမျးမရ နမျးပဈလိုကျမိတော့သညျ..။ ရှငျးသနျ့ပွီး သနပျခါးလိမျးပွီးစမို့ မှေးလို့ ကွိုငျလို့ သူ့ကိုယျကတော့ ခြှေးနံ့တှနေဲ့ နံစျောနမေလား။ ဒျေါခငျသကျ ရငျတှေ အရမျးဖိုသှားရသညျ..။ ခုလို ယောကျြားတဈယောကျရဲ့ အနမျး မခံရတာ ကွာပွီလေ..။ အောကျမှ မလှုပျသာ လှုပျသာ လှုပျရငျး ရုနျးနမေိသျောလညျး မိနျးမနှငျ့ ယောကျြား အားခငျြး မမြှပါခြေ..။ တကယျတော့ ရုနျးသာ ရုနျးနရေသညျ စိတျထဲက သိပ်မပါလှချေ..။ ပိုငျစိုးက သူမနှုတျခမျးကို ငုံခဲ၍ စုပျလိုကျလသေျောကား အပြိုကွီးခမြာ တစ်ကိုယ်လုံး ရှိနျးဖိနျး သှားကာ ထှနျ့ထှနျ့လူးလူး ဖွဈသှားရသညျ..။ ပိုငျစိုး. တျောကှာနျော ဒီလောကျဆို ကနြေပျပါတော့..၊ နခေ့ငျးကွောငျတောငျကွီး..၊ ပွီးတော့ တံခါးကွီးကလဲ ပှငျ့လို့. ပိုငျစိုးက ခုတငျပျေါမှ ခုနျဆငျးကာ အပွငျသို့ ထှကျသှားသညျ..။ တဈမိနဈ မကွာလိုကျ..၊ ပွနျ ရောကျလာပွနျသညျ..။ ပိုငျစိုး ပွနျရောကျလာတော့ မခငျသကျက ခုတငျပျေါမှာ ပက်လက်ကလေး မှိနျးနရှောသညျ..။ ရငျရှားထားသော ထမီကို အထကျသို့ရောကျအောငျ ဆှဲတငျလိုကျရငျး ဝငျလာသော ပိုငျစိုးကို ကွညျ့ကာ . ဘာလုပျတာလဲ.. ဟု ဆို၏။ တံခါး ပိတျခဲ့ ပွီလေ ပိုငျစိုး ပွောပွောဆိုဆို ခုတငျပျေါ တကျလှဲလိုကျကာ လညျပငျးရောကျအောငျ မတငျထားသော ထမီစကို ဆတ်ကနဲ ဆှဲပွီး လြှောခလြိုကျလရော ရငျသားနှဈမှာ ဘွားကနဲ ပျေါသှားသညျ..။
ပိုငျစိုးကွာမငျး ပွောစကားလဲ နားမထောငျဘူးဟငျး. ရီဝသေော မကျြဝနျးမြားဖွငျ့ မကျြစောငျးလှလှ ထိုးနခေိုကျ ပိုငျစိုးက အင်ျကြီနှငျ့ ပုဆိုးကို ခပျသှကျသှကျ ခြှတျပဈလိုကျလတေော့သညျ..။ သူ့ပေါငျကွား၌ ဆတျတောကျ ဆတျတောကျနှငျ့ မာနျဖီနသေော နီညို တုတျခိုငျလှသညျ့ လီးကွီးကို တဈခကျြ ဝကွေ့ညျ့ပွီးမှ .. မကွညျ့ရဲဘူး ကွာ ဟု ဆိုကာ မကျြနှာကို လကျဝါးဖွငျ့ အုပျလိုကျလေ သညျ..။ ပိုငျစိုးက သူမကြောပွငျကို သိုငျးဖကျပငျ့မကာ ထမီကို အောကျသို့ ဆှဲခလြိုကျလရော တငျပါးနှငျ့ ထဈငွိနသေညျမို့ မခငျ သကျက တငျကို ကွှ၍ ပေးလိုကျမိသညျ..။ ပိုငျစိုးက ထမီကို ကှငျးလုံးကြှတျသညျအထိ ဆှဲခြှတျပွီး ခုတငျအောကျ ပုံထားလိုကျ သညျ..။ ခုတော့ မမသကျ တဈယောကျ ဆှဆှေတေ့ာဝနျကို ထမျးရခတြေော့မညျ..။ ဆှဆှေနေ့ရောမှာ ငါပဲ ဖွဈလိုကျခငျြရဲ့ဟု မခငျြ့မရဲ ပျေါခဲ့ဖူးသော စိတ်ကူးတို့ တကယျဖွဈလာခတြေော့မညျ ထငျပါရဲ့။ သငျ့၏ မသငျ့၏ မစဉျးစားခငျြတော့ပါ..။ ယခုအခြိနျ၌ ရမ်မကျမီးလြှံက ဝါးမွိုတောကျလောငျနသေညျမို့ ဒီမီးကိုသာ ငွိမျးပဈလိုကျခငျြ၏။ ဒါပဲသိတော့သညျ..။
ဆှဆှေေ သငျတနျးနားရကျတှမှော ပိုငျစိုးက အိမျချေါ ချေါလာပွီး သူတို့လငျမယား တဈပတျတဈခေါကျ အိပျကွသညျ..။ ခှဲနရေသော တစ်ပတ်စာကို အတိုးချ၍ လိုးကွတိုငျး တဈဖကျခနျးမှ ဒျေါလေးသကျတဈယောကျ စိတျတှေ ဂနာမငွိမျ ဖွဈရသညျ..။ အပြိုကွီး တနျမဲ့ ခြောငျးကွညျ့ဖွဈခဲ့ရသညျမှာ ကွာပွီ..။ အဲဒီကတညျးက မွငျရဖနျမြားခဲ့သော ပိုငျစိုးလီးထဈ နီညိုကွီးကို မမေ့ရ ဖြောကျမရ ဖွဈခဲ့ရသညျ..။ ပိုငျစိုးလညျး ထူးမခွားနားပါပေ..။ ဆှဆှေကေို့ သငျတနျးကိစ်စနှငျ့ ပစ်စညျးတှေ သယျပို့ပေးစဉျ အခေါက်က ဖွတျကနဲ အိမျထဲ ဝငျလာခိုကျ ဒူးပျေါပေါငျပျေါ ရုံမက တငျပါးကွီးနှဈလုံးပါ ပွူးနအေောငျ ပျေါနသေညျ့ မခငျသကျ၏ စွဲမက်စရာ ခန်ဓာကိုယျ အလှကို မွငျခဲ့ရခြိနျမှစ၍ ထိုမွငျကှငျးက လှမျးမိုးနခေဲ့သညျ..။ ဆှဆှေတေို့ ညီအဈမနှဈယောကျစလုံး တဈမြိုးစီ လှကွပါ၏။ ထား အိက အရေိုးဗဈလညျး ကစားထားသူမို့ အဟိုကျအရှိုကျ အဖိုတှကေ တငျးတငျးပွညျ့ပွညျ့ စှဲမကျဖှယျ ကောငျးသလို ဆှဆှေကေ လညျး အိမျထောငျကပြွီးတာတောငျမှ အခြိုးအစားမပကျြပဲ လိုး၍ မဝအောငျဖွဈခဲ့ရသညျ့ မယား..။
အငျး.ဒျေါလေး..မမသက်က ကော..။ အပြိုကွီး စာရငျးဝငျနသေျောလညျး အဈမကွီး အရှယျမြှသာ..။ တညျတညျခနျ့ခနျ့၊ ထွားထွားမို့ မို့၊ အိအိစကျစကျ တဈလုံးတဈခဲကွီး လှသော အလှပိုငျရှငျတဈယောကျ..။ စိတျထဲကတော့ စိတျကူးနခေဲ့တာ ကွာပွီ..။ ကွာပွီဆို သူမ၏ အားမနာစတမျး ကွမျးပဈခငျြစရာ ကောငျးလှသော ရဆေေးငါး ခန်ဓာကို အတှငျးကကြ သိခဲ့မွငျခဲ့ရပွီးကတညျးက ဆိုပါ တော့..။ယခုတော့ .. ထိုရဆေေးငါးကွီးကို စားဖို့ ကိနျးကွုံပါပွီ..။ ပိုငျစိုးသညျ ရဆေေးငါးကွီးကို စိတျတိုငျးကြ စားရနျ အကွေးခှံခှာ သညျ့ အနဖွေငျ့ ပကျလကျကွီး ဖွဈနသေော မခငျသကျ၏ ကိုယျလုံးအိအိကွီးပျေါသို့ အားပါပါ ပဈ၍ မှောကျလိုကျသညျ..။ အိ..ကနဲ အသံထှကျသှားပွီး. မကွမျးနဲ့ကှာ၊ နှားသိုးကွိုးပွတျ.တကထဲမှ…ဟငျ့ မခငျသကျက မကျြစောငျးလှလှ တဈခကျြထိုး လိုကျလရော သကောငျ့သား ပိုငျစိုးတဈယောကျ သဘောတှေ့ မနောခှေ့ သှားရပွီ မမသက်ကို အပြိုကွီးဘဝက ခြှတျပေးခငျြလို့ပါမမ ရဲ့ ပွောပွောဆိုဆို လေးငါးခကျြမြှ ဆကျ၍ ဆောငျ့နရော မခငျသကျခမြာ သဘောကလြှကျကပငျ. ကွညျ့ ပွောလကေဲလေ..နှားသိုး လေးတော့လား.. ဤသို့ ဆိုကာ သူ့ကြောကို လကျသီးဆုတျနှငျ့ ထုကာ ထုကာ မကွာခငျဖွဈလာတော့မညျ့ အရေးအတှကျ ရငျတှေ ခုနျ ဖငျတှတေုနျလြှကျ ပွုံးနမေိတော့သညျ..။
ပိုငျစိုးက မခငျသကျ၏ နို့ကွီးနှဈလုံးကို မကျြနှာအပျလြှကျ ဘယျညာလူးလိုကျသညျ..။ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ တစ်လုံးစီ လူးလှိမျ့ပေးလိုကျ သညျ..။ နို့သီးခေါငျးကလေးမြားကို လြှာဖွငျ့ ကလိ၍ သှားဖွငျ့ မနာအောငျ ငုံခဲပေးသညျ.။ အတှအေ့ကွုံ ရှိခဲ့ဖူးသျောလညျး ယောကျြားတဈယောကျ၏ ခုလိုမြိုး ကလိတိတိဖွငျ့ စိတျတိုငျးကြ ဆှပေးနသေော အရသာကို မခံစားရသညျမှာ ကွာပွီဖွဈ၍ မခငျ သကျခမြာ မနတေတျလောကျအောငျ မရိုးမရှဖွဈကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကွှကွှရှရှ တှနျ့လိမျနသေဖွငျ့ ပိုငျစိုးက သူ့ကိုယျလုံးဖွငျ့ ဖိကာ ဖိ ကာ ဆောငျ့ပေးထိနျးပေးနရေသညျ..။ ခလုတ်ကို ဖှငျ့လိုကျပွီမို့ မီးကလညျး ပှငျ့ခဲ့ခပြွေီ..။ မခငျသကျ၏ ပေါငျနှဈလုံးအရငျးပိုငျး၌ စိုစှတျသော အရညျကွညျတို့ စိမျ့ကနဲ စိုလာပွီမို့ အပျေါမှကပျ၍ ဖိထားသော ပိုငျစိုး၏ ပေါငျရငျးဆီးစပျတို့၌ အစိုဓာတျ ကူးစကျခဲ့ သညျ..။ ယခုလိုအခြိနျ၌ ကိုယ်က မလုပျခငျြပါဘူး ပွောလြှငျတောငျ ထိုငျရှိခိုးကာ လိုးပေးဘို့ တောငျ တောငျးပနျတော့မညျကို သိ သော ပိုငျစိုးသညျ အပြိုကွီးကို ရှသညျထကျ ရှလာအောငျ အစှမျးကုနျ နှိုးဆှပေးနတေော့သညျ..။
ဝမျးပွငျသားတဈလြှောကျ ပတျပတျလညျ သှားအောငျ လြှာဖွငျ့ လကျြ၍ ကလိပေးသညျ..။ ခကျြတှငျးနကျနကျကလေးကို ပါးစပျ ဖွငျ့ ကလေးမွှူသလို မွှူနမျးပေးလိုကျရာ ဒျေါခငျသကျခမြာ ခိုးခိုးခဈခဈ ရယျလြှကျ ဖွတျဖွတျလူးကာ ကွကျသီးတှေ ထသှားရ တော့သညျ..။ ပိုငျစိုးက မကျြနှာကို ဖွေးဖွေးခငျြး အောကျသို့ ဆှဲခလြာရငျး မခငျသကျ၏ မိနျးမအင်ျဂါစပျ လှငျပွငျပျေါ မှောကျ၍ ပှတျ ပေးလိုကျသညျ..။ ရခြေိုးသနျ့စငျပွီးစမို့ အညဈအကွေး ကငျးစငျ၍ လှပလှနျးသော မမသကျ၏ စောကျဖုတျကွီးက သူ့ကို ကွိုဆို နသေညျ။ သူက မမသကျ စောကျဖုတျကွီးကို မကျြနှာအနညျးငယျ ခှာလြှကျ အနီးကပျ ကွညျ့ရငျး တံတှေးကို မြိုခလြိုကျသညျ..။ မခငျသကျကမူ လက်ကို ပတ်တာယှကျသလို ယှကျ၍ ခေါငျးတငျကာ သူမ၏ လြှို့ဝှကျရတနာကို တပ်မက်စွာ စူးစိုကျကွညျ့နသေော ပိုငျ စိုး၏ မကျြနှာကို ကွညျ့နမေိသညျ..။ အငျး..ပိုငျစိုးလေး.ပိုငျစိုးလေးဒီနညေ့ ဆှဆှေလောတဲ့အထိတောငျ မစောငျ့နိုငျတော့ဘူးအေး လေ..သူ့ခမြာလဲ မိနျးမနဲ့ ကွာကွာခှဲနရေတော့ ဆာနရှောမှာပေါ့. မိနျးမပီပီ ကရုဏာ စိတျကလေးဖွဈကာ သူစိတျရှိသလို လိုးပေ စတော့၊ သူ့စိတျတိုငျးကြ ငါ အလိုဖွညျ့လိုကျမယျဟူသော သဘောဖွငျ့ ကနြေပျစှာပငျ မှေး၍ နလေတေော့သညျ..။
ပိုငျစိုးက မခငျသကျ၏ အရညျကွညျမြား စိုရှဲနပွေီး ဖူးဖူးမို့မို့ကွီး ခုံးကွှနသေော စောကျဖုတျကွီးကို တဝကွီး ကွညျ့ပွီး အစလေ့ေး ကို လြှာဖွငျ့ တို့ထိကစားပေးလိုကျရာ အပြိုကွီးခမြာ တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူသွားကာ ဘေးသို့ကားစှငျ့လြှံကနြသေော တငျပါးသားကွီးမြား ကြုံ့၍တကျသှားသညျအထိ နမေထိ ထိုငျမသာ လူးလှနျ့သှားရရှာသညျ..။ ပိုငျစိုးက တဆကျတညျးပငျ စောကျပတျအကှဲကွောငျး ကွီး ပျေါသှားအောငျ လကျခြောငျးမြားဖွငျ့ ခပျကွမျးကွမျးပငျ ဆှဲဖွဲလိုကျပွီး လြှာကိုလိပျကာ ပျေါလာသညျ့ အတှငျးသားနုနုထဲသို့ သှငျး၍ ကစားလိုကျသညျ..။ ပိုငျစိုး၏ ကလိခကျြ ထိခကျြမြားက မခငျသကျ၏ အဓိက ခလုပျမြားကိုခညျြး ကိုငျနသေလို ဖွဈရကား အစာငတျနသေော ကြားသဈမတဈကောငျ အစာကောငျးကို တှရေ့ာ၌ ဣနွေ်ဒမရအောငျ ဖွဈသှားသကဲ့သို့ ပွတျလပျနသေညျမှာ ကွာပွီဖွဈသညျ့ မမသကျတဈယောကျ ပိုငျစိုး၏ အကောငျးစား ပွုစုပေးမှုကို ဖငျတကွှကွှ ရငျတမမဖွငျ့ တစ်ကိုယ်လုံး တှနျ့လိမျ ကော့ပြံကာ ဖွတျဖွတျလူး ဆတျဆတျခါဖွငျ့ ဖီလငျတှေ အဆငျ့ဆငျ့ တကျရပါခပြွေီ..။
အားမလို အားမရဖွဈလှစှာ ပိုငျစိုး ခေါငျးကို မမှီမကမျး ဆွဲ၍ ဆံပငျတှကေို ဖှခပြေေးနမေိသညျ..။ အပြိုကွီးတဈယောကျ နမေထိထိုငျမသာ ဖွဈနပွေီကို သိသော ပိုငျစိုးက အရှိန်ကို မလြှော့ပဲ လကျနှဈဖကျကို ရငျညှနျ့ဆီသို့ လှမျးလိုကျသညျ..။ သူ့လကျနှဈ ဖကျထဲ ပွညျ့လြှံနအေောငျ ဆုတျကိုငျမိသော မမသကျ၏ အိစကျထှားကွိုငျးလှသော နို့ကွီးနှဈလုံးကို အားမနာတမျး ဆုတျခပြှေတျ လှိမျ့ပေးရငျး သူမ စောကျဖုတျကွီးကိုလညျး စိတျတိုငျးကြ မှေ၍ လကျြလိုကျ၊ ကလိလိုကျ၊ သှားဖွငျ့ ခပျဆတျဆတျလေး ကိုကျ ပေးလိုကျ လုပျနလေရော ခင်ျသွမေ့ငျးပွုသမြှ နုနရေရှာသညျ့ သမငျငယျလေးပမာ အသကျရှူသံ ပွငျးပွငျးမှုတျ၍ လူးကာလှနျ့ကာ ဖွငျ့ မမသကျတဈယောကျ ကွိတျမှိတျ ခံစားနရေရှာပါလေ၏..။ ပိုငျစိုးကမူ မလြှော့ရေးခြ မလြှော့..။ ကွာသျော မမသကျတဈ ယောကျ မနနေိုငျလှနျးတော့ပွီမို့ သူပွုသမြှ အကောငျးခညျြး ဖွဈနသေျောလညျး ဒီလောကျကွီး ကောငျးလှနျးနခွေငျးကို လုံးဝ သညျးမခံနိုငျတော့ပါ..။ ပါးစပျမှ တအီးအီး၊ တအငျးအငျး ညညျးညူနရောမှ . မောငျ.မောငျလေး ပိုငျ စိုးအား.အား..ရှီးကြှတျ ကြှတျ အ.ရှီး မောငျလေးတျောတျောတော့ကှာ မမသကျအီး.ဟီး.ဘယ်လိုမှ မနနေိုငျတော့ဘူးကှယျ မခငျသကျတဈယောကျ ဤကဲ့သို့ တားမွဈရသညျအထိ ဖွဈလာပါတော့၏။
ဒါတောငျ ပိုငျစိုးက မလြှော့သေးဘဲ နှဈမိနဈသာသာမြှ ဆကျ၍ ဆုတျပေး စုပျပေး မှုတျပေး နပွေနျရာ မမသက်ခမျာ ဘာမှ မတတျနိုငျ တော့သလို ဆကျ၍သာ အဆွ ခံနရေရှာသညျ..။ မောငျလေးမ..မမ ကို သနား ပါကှယျ နျောအ..အား ဘယျ.လိုမှ မနေ နိုငျတော့ဘူး လိုး .လိုးတော့နျောလိုးပါတော့ ကွာ နျော..မောငျ.မောငျလေးအား..အငျးရှီး ကြှတျကြှတျ မမ..ကနြျော မှုတျပေးတာ ကွိုကျလား ဟငျ ကောငျးလား မခငျသကျတဈယောကျ တျောတျောနှငျ့ စကားမပွနျနိုငျရှာ။ အတနျကွာမှ ဟငျး ခနဲ သကျပွငျးရှညျကွီး မှုတ်ထုတ်ကာ. သေ..သတေော့မယျ ဒီမှာ မ.မမ ဘယျလောကျထိ ကောငျး ကောငျးနလေဲ မငျး မသိဘူး.. ဟငျး ဟငျးဟဲ.အငျးဟငျးလိုး လိုးပေးပါ တော့ မောငျလေးရယျနျော. နျောလို့.ဟငျးတကထဲမှ လူကို ဣနွေ်ဒမရအောငျကို မှုတျတော့တာပဲတျောတျောဆိုးတယျ လုပျလုပျ တော့ မွနျမွနျလေးဟငျး အငျး မောငျလေးက မမသကျ အရသာ ရှိသထကျ ရှိအောငျလို့ပါ..၊ မမကလဲ ဒီလောကျကောငျးနတောကို မြား စိတျဆိုးရတယျ..လို့ အငျး .ဟငျးစိတျဆိုးလို့ ပွောတာ မဟုတ်ဘူးဟဲ့..၊ သနောလေးရဲ့.. ဒီက သိပျပွီး အလိုးခံခငျြလှနျးလို့ ပွောနေ တာအငျး..အမေ့..အဲ့.ဟငျး ကွညျ့ပါလားလို့၊ ဟငျ.လိုးတော့လို့ ပိုငျစိုးက အမှုတျကိစ်စကို ရပ်နား၍ အလုပျကိစ်စဝငျရနျ ပွငျဆငျလေ သညျ..။
ခပျမွနျမွနျပငျ သူမ ဒူးနှဈဖကျကို ကိုငျဖွဲလိုကျကာ ဟပွီး ခှဲပွီးဖွဈသှားသော ပေါငျနှဈလုံးကွား ဒူးထောကျ၍ ထိုငျလိုကျပွီး လကျနှဈ ဖကျဖွငျ့ ဆုပျကိုငျထားသော ဒူးကောကျကှေးကို ပငျ့၍ တှနျးတငျလိုကျသညျ..။ ဒူးကောကျကှေးမှ အထကျပိုငျး ပေါငျတံနှဈခြောငျး က ဘေးသို့ ကားနရောမှ စုထောငျသှားကာ ဒူးကှေးမှ အောကျ ခွသေလုံးပိုငျးသညျ အောကျသို့ ညှတျကနြရေကား မခငျသကျ၏ တငျပါးအောကျပိုငျးသညျ အင်ျဂလိပျအက်ခရာ ပုံစံဖွဈနလေသေညျ..။ ပိုငျစိုးက လိငျတံထိပျဖူးကို မခငျသကျ စောကျဖုတျ နှုတျခမျးဝ နှငျ့တဆေ့ကျ ဆကျနရော တျောတျောနှငျ့ မတညျ့..။ စိတျမရှညျတော့သော မမသက်က .. ဟှနျး.တကထဲမှ ..ပဲ. ဟု ခပျပွုံးပွုံးလေးဆို ရငျး ပိုငျစိုး လီးတံထိပ်ဖူးကို လကျခြောငျးနုနုလေးမြားဖွငျ့ ဆုတျကိုငျကာ သူမစောကျခေါငျးဝနှငျ့ ဆကျပေးလိုကျတော့မှ ပိုငျစိုးက တငျပါးကို ဖိ၍ အားစိုက်ကာ နှဈလိုကျတော့သညျ..။ ဇွိဇွိ.ဇွိ.. မွညျသံပေး၍ သူ့လထဈကွီး နဈဝငျသှားသမို့ မခငျသကျတဈယောကျ စောစောကလို မပွုံးနိုငျတော့ရှာပဲ မကျြလုံးလေးကို မှေး ပါးစပျလေးကို ဟကာ ကာမအရသာကို ယဈမူးခံစားနပေါတော့သညျ..။
လိုးထညျ့လိုကျရသညျမှာ စီးစီးပိုငျပိုငျ ရှိလှနျးလှပါ၏။ အနမျးအရှုပျ အမှုတျ အလကျြ စုံလငျစှာဖွငျ့ စိတျတိုငျးကြ နှူးထား၍ နူးအိ ဖောငျးရှနတောတောငျမှ ပိုငျစိုး လထဈကွီးတဈခြောငျးလုံး ခပ်စီးစီး ခပျကွပျကွပျ ဝငျသှားရသညျ..။ ရှပျခနဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝငျခွငျး မဟုတျပါ..။ ဇိကနဲ တှနျး၍ ဝငျသှားခွငျး ဖွဈသညျ..။ ရငျသားတှေ ဖငျသားတှကေ ဆှဆှေထေ့ကျ ထွား၍ ကားကားမို့မို့ ဖောငျး ဖောငျးကွှကွှကွီးမို့ လိုးမကောငျးလောကျဘူး ထငျထားခဲ့သညျမှာ မှားပွီ..။ ဆှဆှေကေ မမသကျထကျ ရငျတှေ တငျတှေ နညျး နညျးငယျသျောလညျး စောကျဖုတျကမူ ထှားကွိုငျးလှခသြေညျ..။ မမသကျမတော့ ပွညျ့တငျး အိကားသော အသားဆိုငျမြား ကွောငျ့ စောကျဖုတျက ညှပျသလို ဖွဈနေ၍လား မသိ..။ ကွီးမားသော တငျပါးကွီးနှဈဖကျနှငျ့ ဘာမြှပငျ မဆိုငျ..။ စီးစီးပိုငျပိုငျကွီး လိုး၍ ကောငျးလှနျးလောကျရုံ အနတေျောလေး ဖွဈနသေညျ..။
ပိုငျစိုး လီးတံကွီးက ပွောယူရလောကျအောငျ ကွီးမားတုတျခိုငျလှနျး၍လားတော့ဖွငျ့ မဆိုသာပါခြေ..။ ဖွဈတော့ ဖွဈနိုငျပါ၏.။ ဆှဆှေလေဲ ခုမှသာပါ..။ ညားကာစကများဆို..တျောပါတော့ဟု တားယူရလောကျအောငျ သူမခမျာ နာကငျြစှာ အလိုးခံခဲ့ရသညျ..။ အခုတော့ နတေို့ငျးညတိုငျး ဝငျနကြေ ထှကျနကေမြို့ ဒီလီးကွီး၏ လုံးပတျနှငျ့ အရှညျဒဏျကို ခံနိုငျရညျ ရှိနခေပြွေီ..။ မမသက်ကေ တာ့ တဈခါမှ မခံရသေးတဲ့ စောကျဖုတျမို့လား၊ ဒါမှမဟုတျ မခံရတာ ကွာလို့လားတော့ မသိ လိုးရတာ ကွပျကွပျသပျသပျ ရှိလှနျး လှသညျ..။ ပိုငျစိုးက အဆုံးထိ ဝငျသှားသော သူ့လီးကွီးကို ပွနျနှုတျ၊ ပွနျထိုးလိုကျဖွငျ့ အသာလေး မှေးပွီး လိုးဆောငျ့နလေေ သညျ..။ လိုးကွာ.အငျး ဟငျး.ခပျသှကျသှကျလေး လိုးပေးပါနျော အငျး ဟငျ့..အမလေးကောငျး . ကောငျးလိုကျတာဟုတျဟုတျ တယျအငျး ဟုတျပွီ၊ ကြှတျ..ကြှတျရှီး.ရှီး.အီး အငျ့..အားဆောငျ့ဆောငျ့. နာနာလေး ဆောငျ့ အေး အေးကှယျ.လိုး လိုးအားရပါးရသာ လိုးမမ စောကျဖုတျကွီး ကှဲခငျြ ကွဲသွားပစေ အားအငျး ကြှတျ..ကြှတျ.ရှီးအားအငျ့ ဟငျ့. ဟအားအီး.ဟီး.အ. မခငျသကျတဈ ယောကျ ဟနျဆောငျမှုတှေ တဈခုမကနျြ ကှာကသြှားပွီး.. သူမဆန်ဒကို ဘယ်လိုမှ မထိနျးခြုပျနိုငျတော့ဘဲ နှုတျမှ ဖှငျ့ဟရတော့၏..။
သူမ၏ မကျြနှာ အမူအယာကလညျး ရမ်မကျအခိုးအလြှံ မြားဖွငျ့ ရီဝေ တကျကွှ၍ ထူးထူးကဲကဲ တပျမကျခငျြစရာ လှပလှနျးနေ တော့သညျ..။ မိနျမတဈယောကျ၏ စောကျဖုတျထဲ လီးဝငျနခေိုကျ ထိုမိနျးမ၏ မကျြနှာ၌ တှရေ့သော အမူအယာမှာ ထိုအခြိနျ၌သာ တှရေ့သညျ့ အလှနျရှားပါးလှသော အလှတဈမြိုး မဟုတျပါလား။ ပိုငျစိုးက စိတျလှုပျရှားစရာ ကောငျးလှသော မမသကျ၏ ရမ်မကျ လှိုငျးကွှ မကျြနှာပေးကို တစိမျ့စိမျ့ ရှုစားရငျး ရာဂစိတ်တို့ ကွှသထကျ ကွှလာကာ မမသကျ အလိုကျ အစှမျးကုနျ အားသှငျးပွီး ခပျသှကျသှကျ ဆောငျ့ပေးတော့သညျ..။ ကွောငျခံတှငျးပကျြနှငျ့ ဇရကျတောငျပံကြိုးတို့ တှကွေ့သညျ့ပှဲမို့လား မသိ၊ ဖိုနှငျ့မတို့ အခဈြနယျကြှံပွီး ကာမဂုဏျ ခံစားနကွေပုံမှာ ထိတျလနျ့စရာ ကောငျးလှတော့သညျ..။ အတနျကွာမြှ စိတျရှိလကျရှိ ဆောငျ့ ဆောငျ့ လိုးနပွေီးမှ ခဏရပ်ကာ မမသကျ၏ ကိုယျလုံးကွီးကို ဘယ်ဖကျသို့ စောငျးပဈလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ သူမ၏ ညာဘကျ ပေါငျတံကို ပငျ့၍ တှနျးကပျလိုကျရာ စငျးထားသော ဘယျခွထေကျ၌ အားကစား လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျသလိုမြိုး ကှေး၍ တငျမွှောကျထားသညျ့ ပုံစံ ဖွဈသှား၏..။ မမသကျ ပိုငျစိုး ပွငျဆငျပေးသမြှ ငွိမျ၍ ခံနလေိုကျသညျ..။ သူ့အလိုကြ ကွှကျသားမြားကို ဖွလြှေော့၍ ပေး ထားလိုကျသညျ..။ ကွိုကျသလိုသာ ပွငျဆငျ ၊ ကွိုကျသညျ့ပုံစံဖွငျ့သာ လိုးပတေော့ ကောငျဆိုးလေးမောငျပိုငျစိုးလေးရေ။ တစ်ဖကျ သို့ စောငျးထားသညျမို့ မခငျသကျ၏ ခါးက နိမျ့ဆငျးနပွေီး တငျပါးကွီးတဈဖကျက ခုံး၍ ကှေးကာ မွငျ့ကားနသေညျ။
စူကား မို့မောကျနသေော ဖငျသားဆိုငျနှဈမွှာက အိစက်ကာ နောကျသို့ ပစ်ထား၏။ တုတျခိုငျအိဖှေးသော ပေါငျတံလုံးကွီးနှဈခုက ပူးဆငျ့ နသေညျ။ အရငျးပိုငျးခငျြးမှာတော့ ခပ်ကွာကွာဟလို့ နေ၏။ ဘယျခွမျး ပေါငျးလုံးရငျးက နောကျသို့ အနညျးငယျ ပစ်ထားကာ ညာခွမျး ပေါငျလုံးရငျးက ရှသေို့ တှနျးပို့ခံထားရသမို့ ပေါငျရငျးခှဆုံရှိ လီးနှုတျပွီးကာစ မမသကျ၏ စောကျဖုတျကွီးခမြာ စူအကျစူအကျ ရှစိရှစိဖွဈကာ လီးကွီးဝငျလာတော့မညျကို အဆငျသငျ့ စောငျ့ကွိုနဟေနျဖွငျ့ အသားနီမြားပငျ လနျထှကျတော့မလောကျ မှတျသိပျ နရှောသညျ။ ပိုငျစိုးက မမသကျ၏ တငျပါးခုံးခုံးပျေါ လကျတငျကာ ဖငျပွောငျပွောငျနောကျ၌ ကပျလိုကျပွီး အံကဖြွဈနသေော စောကျဖုတျစူစူထဲသို့ ထိပ်ဖူးကို တေ့၍ နှဈလိုကျသညျ။ ဒီတဈခါတော့ လြှောကနဲ ဝငျသှားပါ၏။ အနအေထားကလညျး ပေါငျနှဈခွမျး ကို ဖွဲဟထားသလိုမို့ စောကျဖုတျကွီးက စူစူမို့မို့ကွီး ဖွဈနပေါတော့သညျ။ အဆုံးအထိ သှငျးထားရာမှ ဆတ်ကနဲ ပွနျထုတျလိုကျပွီး ကြှတျလုကြှတျခငျ ဖွဈမှ အားစိုကျ၍ ဆောငျ့လိုးပေးလိုကျပွနျသညျ။ တစ်စတစ်စ ဆောငျ့ခကျြမြားက ပွငျးထနျလာသညျ။ သူက အားစိုကျ၍ ဆောငျ့လိုကျတိုငျး ဆောငျ့လိုကျတိုငျး မမသကျ၏ အိစကျထှားမို့သော ရငျသားကွီး နှဈမွှာက ယမျးခါ၍ တအိအိ ဖွဈနေ တော့သညျ။ သူမကလညျး အငွိမျမနပေဲ တငျကို နောကျသို့ ပဈပဈပေးရငျး ညာလကျဖွငျ့ သူ့ကိုယျလုံးကို စမျးမိစမျးရာ စမျး၍ ဆိတျ ဆှဲညှဈလိမျကာ အားမလိုအားမရ ဖွဈကွောငျး ညှနျးဆိုနသေညျသို့ ရှိ၏။
ပိုငျစိုးကလညျး အိထှားကားပွနျ့သော အပြိုကွီး၏ ဖငျသားဆိုငျကွီးမြားနှငျ့ သူ့ဆီးခုံရငျးတို့ အားရှိပါးရှိ ပဈပဈဆောငျ့လိုကျတိုငျး ဖ တ်ခနဲ ဖတ်ခနဲ မွညျကာ တုန်ခနဲ တုန်ခနဲ အိတကျသှားသော နူးညံ့ဝငျးဝါသညျ့ တငျသားဆိုငျကွီးမြားကို ကွညျ့ရငျးကွညျ့ရငျး ကာမစိတျ တှေ ပွငျးထနျသညျထကျ ပွငျးထနျလာသညျ။ ဆောငျ့ခကျြကလညျး အားပါလှနျးလှသဖွငျ့ ခံရသူမှာ မသကျသာပါ။ မမသကျတဈ ကိုယျလုံးလညျး မညှာမတာ ဆှဲယမျး၍ အလှုပျခံနရေသော သဈပငျငယျလေးပမာလို ဖွဈနရှောသညျ။ မမသကျ၏ နှုတျမှ ကောငျး လှနျးလှသော ကာမစညျးစိမျကွောငျ့ တအိအိတအအညညျးသံလေးမြားကလညျး စညျးခကျြပမာ ထှကျပျေါလို့ နပေါ၏။ ပိုငျစိုးက ထှကျလုထှကျခငျဖွဈနသေော သုတ်ကို ထိနျးသညျ့အနဖွေငျ့ ဇွပ်ကနဲ အသံမွညျအောငျ လီးတနျကွီးကို ဆှဲနှုတျလိုကျသညျ။ တငျးကပျြ နအေောငျ ရိုကျထားသညျ့ ခပျတုတျတုတျ စို့ကွီးတဈခြောငျး မရှိတော့သလိုဖွဈကာ မမသကျ စောကျဖုတျကွီးမှာ ဟာကနဲ ဖွဈသှား ရပွီး အ၇ှိနျမသတျနိုငျပဲ ပွစိပွစိ ဖွငျ့ ရှစိထိုးနလေတေော့သညျ။ မောငျ.မောငျလေး .. ပွီးခငျြပွီလား မမသက်က တုံရီဟိုကျသော အသံဖွငျ့ မေးလာသညျ။
ဟုတျတယျ မမသကျ .. စိတျထဲမှာ မထိနျးနိုငျတော့လို့ ခဏနားလိုကျရတာ ဆကျသာ လိုးနလေို့ကတော့ လရေတွေ ထှကျကုနျတော့ မှာ ဟငျ့အငျးဟငျ့အငျး ထှကျထှကျ ဆောငျ့သာဆောငျ့ကှာ..၊ မမ အရမျးကောငျးနတောမောငျရဲ့. မမသက်က မှတျသိပျဆာလောငျစှာ သူမဆန်ဒတှကေို ထုတျဖျောလာပါသညျ။ ပိုငျစိုးက . အငျးပါ မမရဒီတဈခါ အပျေါကမှောကျပွီး အားရပါးရ လိုးမယျလေ. အပွီးသတျပေါ့..မမကော ပွီးကာနီးပွီလား မခငျသကျက စိတျမရှညျတော့သော အသံဖွငျ့ အငျး .. ဟု တဈခှနျးဆိုပွီးနောကျ ဒီက အရမျးကောငျးနပွေီ ဥစ်စာ၊ မငျးလီးကွီးသာ ဆကျဆောငျ့နရေငျ ခုလောကျဆို ပွီးနရေောပေါ့ လုပျလုပျတော့၊ စိတျရှိလကျရှိသာ ဆော ငျ့လိုးတော့မမကို မညှာနဲ့ မမလဲ ပွီးတော့မှာ အငျးဟငျ့.ဟငျးမခငျသကျက ပိုငျစိုး အလိုကျ ကိုယ်ကို ပကျလကျလှနျပွီး ပေါငျနှဈခြောငျး ကားကားစငျးစငျး ဖွဈသှားအောငျ အိပျနလေိုကျသညျ။ ပိုငျစိုးက မခငျသကျ၏ ကိုယျလုံးအိအိကွီးပျေါသို့ တညျ့တညျ့မှောကျလိုကျ ရာ သူ့လီးတနျရှညျကွီးက ဆီးစပျပျေါထိ မှေး၍ ပူနှေးနှေး စိုအိအိကွီး မေးတငျနသေညျ။ ဟငျးလုပျတော့လကှေယျ..လို့.မခငျသကျ က မောလစြှာ ဆိုရငျး သူ့ကို ရီဝစှော ကွညျ့နေ၏။ သူက သူမနှုတျခမျးကို ခပျကွာကွာလေး ငုံလိုက်ကာ မှေး၍ ခတ်ေတ နားနသေညျ။ ပွီး မှ ခါးကိုကွှလိုကျပွီး သူမ၏ ဖွဲကားထားသော ပေါငျကွီးနှဈလုံးကွားရှိ စောကျဖုတျကွီးနှငျ့ တညျ့တညျ့ခြိနျကာ ထိုးထညျ့လိုကျ သျောလညျး ငနဲသား မောငျရှလေီးက ခြျောခြျောထှကျနသေညျ..။
မခငျသကျက တခဈခဈဖွငျ့ သဘောတှကေကြာ.. လှဲနတေယျဟဲ့မောငျလေးရဲ့..၊ ဖယျဖယျမငျးဟာကွီး မထား၊ အငျးပေးပါဟာ ကဲ..ဟုတျ..ဟုတျပွီထညျ့လိုကျတော့ဒီအတိုငျးပဲ ထညျ့လိုကျဟုတျတယျအား.အိ..အီးကြှတျ..ကြှတျ ဆောငျ့..ဆောငျ့ကှယျ အီး ရှီး..မောငျ..မောငျလေးအားဆောငျ့ဆောငျ့..နာ နာလေးအငျး..အ.အဲဟုတ်ပီရှီး.ကြှတျ..ကြှတျအမေ့အငျ့ဟီး..ဟငျးအား..ကောငျး..ကောငျးလိုကျတာ..အား.. မခငျသကျက ပိုငျစိုးလီးကွီးကို ကိုယျတိုငျကိုငျပွီး သူမစောကျဖုတျထဲ ထညျ့ပေးရငျး ခပျ ကွမျးကွမျး ဆောငျ့ခကျြမြား၌ ယစ်မူးစွာ ရှိနပေါတော့သညျ..။ ပိုငျစိုးကလညျး ဆောငျ့ကောငျးကောငျးနှငျ့ မီးကုနျယမျးကုနျ ပဈပဈ ဆောငျ့တော့သညျ..။ အားပါလှသော သူ့လိုးဆောငျ့ခကျြမြားကွောငျ့ မမသက်ခမျာ အံကိုကွိတျကာ မျက်လုံးများ စုံမှေးလကျြ ပါးစပျမှ တကဈြကဈြ တရှီးရှီး မွညျအောငျ စုပျသပျရငျး ခေါငျးကို ဘယျညာလူးပွီး သူ့ကြောပွငျကို လကျသညျးမြားဖွငျ့ ကုတျခွဈကာ တှနျ့ လိနျ ကော့လနျနပေါတော့သညျ..။
သူမ၏ လှုပျရှားမှုမြားအရ အထှတျအထိပျသို့ သူမ ရောကျနပွေီဟု ပိုငျစိုး အတတျသိလိုကျ၏။ သူက မမသကျ၏ နို့အုံကွီးနှဈလုံးကို အုံအရငျးမှ ပယျပယျနယျနယျ ဆုပျကိုငျလိုကျသညျ..။ ပွီးမှ အသက်ကို ဝအောငျရှူလိုကျကာ ခါးကို မွှောကျကာ ပငျ့ကာ အားရှိပါး ရှိ အသားကုနျကွုံး၍ လိုးလတေော့သညျ..။ ပိုငျစိုး ဆောငျ့ခကျြမြားက အားမာနျပါလှသလို အောကျမှနေ၍ စကောဝိုငျးမှသေ့လို ဖငျ ဆုံကွီးနှဈဖကျကို လှညျ့ကာ ဝိုက်ကာ စိတျတိုငျးကြ လှုပျ၍ အလိုးခံပေးနသေော မမသကျ၏ အပငျ့..အရှိုကျ အဟိုကျအဝတေို့ကလညျး မာနျပါလှခြေ၏..။ ဘာမှ မကွာလိုကျ။ ပိုငျစိုး၏ လခြောငျးကွီးတဈခုလုံး ယားကြိကြိနှငျ့ ကငျြတငျတငျ ဖွဈလာကာ တငျး တောငျ့လာပွီး တစ်ပတ်စာ သိုလှောငျထားခဲ့သော ဆှဆှေအေ့တှကျ သုတျရညျတှကေို ဒျေါလေးသကျ စောကျဖုတျထဲသို့ ပနျးထုတျလိုကျ ရတော့သညျ..။ ပူနှေးစေးပဈြသော သုတျရညျတို့က သူမ၏ သားအိမျဝကို အရှိနျဖွငျ့ ပကျဖနျြးလပွေီတကား..။ ခပျဝေးဝေး လမျးမဆီမှ ကားသံ ၊ ကလေးများ၏ ဆော့ကစားသံ၊ လူသံ အခြို့ကို ကွားနရေ၏။ ဘာလိုလိုနှငျ့ ပိုငျစိုးနှငျ့ မခငျသကျတို့၏ ကာမ လှနျဆှဲပှဲကွီး ဆငျနှဲခြိနျမှာ တဈနာရီကြျောကြျောမြှ ကွာလသေညျ..။
ကွာဆို မမသကျ ကွညျကွညျဖွူဖွူ ပေးခငျြလာသညျအထိ စောငျ့စားရ နှူးနှပျရတာကိုက နာရီဝက်နီးပါး ရှိခဲ့သညျကိုး..။ စောငျ့စား ရကြိုး၊ ကွိုးစားရကြိုး နပျပါလေ၏။ ပိုငျစိုး အိမ်က ထှကျသှားသောအခါ ၃ နာရီတောငျ ထိုးလုပွီ..။ သူက မမသက်ကို အနမျးဖွငျ့ နှုတျဆကျကာ ခပျသှကျသှကျကလေး ထှကျသှားလသေညျ..။ ပွီး.မမသကျ၏ ဆန်ဒအရ တံခါးကို အပွငျမှ ကနျ့လနျ့ခသြှားပေးခဲ့ သညျ.။ သူမကတော့ မစားရတာကွာပွီ ဖွဈသော အနှဈသကျဆုံးသော ကာမအဟာရကို မှတျသိပျ ဆာလောငျနခြေိနျ၌ တဝကွီး စားလိုကျရသဖွငျ့ အစှမျးကုနျ ကနြေပျ၍ နလေတေော့သညျ..။ သို့ပမေယျ့.. ပိုငျစိုး၏ အဆုတျအနယျ အဖိအဆောငျ့တို့က တဈခါ ဆို ဆိုသလောကျ အားပါလှနျးလှသဖွငျ့ လကျမောငျး၊ နို့အုံ၊ ဖငျဆုံ၊ ခါးစပ်တို့၌ နာကငျြနလေတေော့သညျ..။ အနာဆုံးနှငျ့ အကောငျး ဆုံးကတော့ သူမ၏ လကျရှေးစငျ စောကျဖုတျကွီး ဖွဈကွောငျး ပွောဖို့ပငျ လိုမညျမထငျပါ..။ မခငျသကျတဈယောကျ သူ အားရပါးရ လိုးပွီး ထားပဈခဲ့သညျ့ ပုံစံအတိုငျး ကိုယ်တုံးလုံး အနအေထားကွီးဖွငျ့ပငျ ကုတငျပျေါတှငျ ပကျလကျ ကားယားကွီး အိပျ လကျြ မှေးနလေိုကျသညျ..။
တဈခကျြ မှေးခနဲ ဖွဈသှားပွီးမှ အအေးပတျမညျစိုး၍ ခုတငျအောကျ ရောကျနသေော ခွုံစောငျပါးပါးလေးကို ဖွဈသလို လှမျးကာ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပဈလိုကျလရော အစာဝသှားပွီဖွဈသော မခငျသကျတဈယောကျ အပြိုကွီး စညျးစိမျ အပွညျ့ဖွငျ့ ခပျကား ကားကွီး အိပျပြျောသှားလသေညျ..။ အိပျရာကနိုးတော့ နတေျောတျောခြိုနပွေီ..။ အိပျရေးဝဝ အိပျလိုကျရသဖွငျ့ လနျးဆနျးသှား သလို ရှိ၏။ လနျးသညျထကျ လနျးစရေနျ ရခြေိုးပဈလိုကျသညျ..။ သူ စှနျ့ပဈထားခဲ့သညျ့ ကြိခြှဲခြှဲ အဖွူရညျမြား ပပှေနသေော စောကျဖုတျကွီးထဲသို့ လကျနှိုကျ၍ သနျ့စငျအောငျ အထူးဂရုစိုကျလသေညျ..။ တစ်ကိုယ်လုံး စိမျ့သှားအောငျ လောငျးခြိုးလိုကျတော့မှ လနျးဆနျးရုံမက အားပါပွညျ့သှားသလို ခံစားလိုကျရသညျ..။ တငျးပွညျ့ကပျြပွညျ့ ကာမဂုဏျ ခံစားလိုကျရသဖွငျ့ စိတျထဲမှာ အလိုလို ကနြေပျနသေညျ..။ ရခြေိုး အဝတျအစားလဲပွီး သနပျခါး ပါးပါးလိမျးကာ ကွောငျအိမျထဲမှ ဖီးကွမျးငှကျပြောသီး ပြော့ပြော့နှဈလုံးကို စားလိုကျသေး၏။ ပကျလကျကုလားထိုငျ၌ ခတ်ေတ အနားယူနစေဉျ အပွငျမှ ခွသေံမြားကွား၍ မှောငျစပွုနေ သော အခနျးကို မီးဖှငျ့လိုကျသညျ..။
အငျးဒီညတော့ သူနဲ့ ဆှဆှေတေို့ရဲ့ ပွဲကို ကွညျ့စရာ မလိုလောကျအောငျ ဝသှားပွီ ဟငျး..ကောငျဆိုးလေးနခေ့ငျးက ငါ့ကိုလိုးပွီး ညကျ ငါ့တူမကို လိုးအုံးတော့မယျ ဆှဆှေကေတော့ သိရှာမှာ မဟုတ်ဘူး သိမြားသိရငျ တော့ နောကျဆို သူ့ယောကျြားအိမ်ကို တဈ ယောကျထဲ မသွားရ ဆိုပွီး တဈခကျြလှတျ အမိနျ့ ထုတျမယျ ထငျပါရဲ့ ဤသို့တောငျစဉျရမေရ တှေးနခေိုကျ ကြှပျကြှပျအိတျဖွငျ့ စားစရာတှေ ဆှဲပွီး ခပျသှကျသှကျ ဝငျလာသော ပိုငျစိုးကို တှလေို့ကျရသဖွငျ့ မခငျသကျက ဟဲ့..ဆှဆှေေ ရောဟငျ အလောသုံးဆယျ ပုံစံဖွငျ့ မေးလိုကျရာ သူက ပွုံးစိစိဖွငျ့ လကျညှိုးကိုထောငျကာ လီးတောငျသလို တဆတျဆတျ လုပျပွရငျး ကုလားကွီးနောကျ လိုကျသှားပွီ. ဟု စလိုကျသညျ..။ ဟာ.ဟုတျပါဘူး.ဒီကောငျလေးအကောငျးပွောတာ မခငျသကျက မှငျ တညျတညျ ဆိုလိုကျတော့မှ. တကထဲမမကလဲ ..ဒေါခညျြ့ပဲ..၊ ဖွေးဖွေးပေါ့.ပွောမှာပေါ့..မမရဲ့.. ပိုငျစိုးက လကျထဲမှ အထုပျတှေ ကို ကွမျးပျေါပဈခလြိုကျကာ မခငျသကျ၏ ခွရေငျး၌ ထိုငျလိုကျပွီး ကုလားထိုငျပျေါ၌ မှေးနသေော အပြိုကွီးကို မှေးမှေးပေးလိုကျ သညျ..။
အားအမောကို ပွသှေားတာပဲ..မမရာ သွား.သူခိုးလေး မေးတာဖွငျ့ မဖွဘေူးဆှဆှေမေပါဘူးမို့လားဒါကွောငျ့ ..သူ အူမွူး နေ.ဟငျး. မခငျသကျကလညျး ကွိတျ၍ ကနြေပျနလေကျြကပငျ စိတျဆိုးဟနျ တမငျပွု၍ နှုတျခမျးကို စူထားလိုကျလသေညျ..။ ပိုငျစိုးက သူမကို ခြိုငျးကွားမှ ဆှဲမထူလိုကျသညျ..။ အပြိုကွီးက ပကေပျကပျပုံစံဖွငျ့ တငျးခံနေ၏။ သူက မရမက ဆှဲယူလိုကျရာ မ ပါခငျြ့ပါခငျြ ပုံစံဖွငျ့ မတျတတျကွီး ပါသှားပွီး ပိုငျစိုး ရငျခှငျထဲ ရောကျသှားရလသေညျ..။ ဟှနျ့.တျောတျောကဲ၊ ဒီကဖွငျ့ စောကျဖုတျတှေ နာလို့ကောငျးတုနျး၊ ဒါက ဘာလုပျအုံးမလို့လဲ..၊ လိုးခငျြပွနျပွီလားဒီလီးက မခငျသကျက ဆှဆှေမေပါမှနျး အသေအချာ သိ လိုကျရာ ကွှရှလာသော ကာမစိတျအဟုနျဖွငျ့ ညဈတီးညဈပတျလေး ခပျရှငျရှငျ ခပျမွူးမွူး ပွောလိုကျပွီး ပိုငျစိုး ကြောပွငျကို တအုနျးအုနျး ထုလတေော့သညျ..။ သူက တဟားဟားရယျရငျး သူမ၏ ကြောပွငျကို သိုငျးဖကျထားရာမှ ရခြေိုးပွီးစမို့ အေးစကျစကျဖွငျ့ နှေးနသေညျဟု ဆိုခငျြစရာ ဓါတျတဈမြိုး စိမျ့ဝငျနသေော မမသကျ၏ တငျပါးကွီးကို ခပျတငျးတငျးဆုတျ၍ လှိမျ့ ခြေ ပှတျသပျပေးနသေညျ..။ လူဆိုးလေး ဖယ်ကွာမမ ရငျတှေ ခုနျလာပွနျပွီခဏလေးများ အမောဖွပေါအုံးတော့လား..ကွာ တက ထဲ မစားရတာ ကနြတောပဲသွား ရခြေိုးလိုကျအုံး၊ သူ့ကိုယျကဖွငျ့ ခြှေးစျောတှကေို နံလို့.. ဤသို့ ဆိုကာ တှနျးလှတျလိုကျသညျ..။
ဟဲဟဲ. မမဖုရားရဲ့ အမိနျ့တျောမွတျ အတိုငျးပါပဲ.. ပိုငျစိုးက ရှတျတီးရှတျနောကျ ဆိုရငျး ရခြေိုးရနျ ပွငျလိုကျသညျ..။ ဆပျပွာ ၊ သဘကျ စသညျကို ယူပွီးမှ မမသကျရှိရာသို့ တဈခေါကျပွနျလာကာ. ဟဲ..ဟဲ မမဖုရားရခြေိုးပွီးပွီးခငျြးနျော.ဖုရာ့. ဤသို့ ပွောဆို ကာ မခငျသကျ၏ အိစကျထှားကားနသေော တငျသားဆိုငျကွီးကို တဈခကျြ ပုတျ၍ ထှကျသှားလတေော့သညျ..။ မခငျသကျခမြာ လညျး နခေ့ငျးက စားထားဘူးသညျ့ ပိုငျစိုး၏ လီးအရသာကွီးကို တှေးလိုကျမိပွီး ရငျတှခေုနျ၊ ဖငျတှတေုနျကာ စောကျဖုတျကွီး တစ် ခုလုံး ယားကွှလာလတေော့သတညျး။
မိုးတွင်းကြီးမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း နေတွေများ သာလို့၊ ပွင့်လို့၊ ဈေးခြင်းကို စားပွဲပေါ် တင်လိုက်ရင်း နဖူး၌ သီးနေသော ချွေးစက်များကို သုတ်လိုက်သည်..။ ပြီး.. အခန်းထဲ ဝင်ကာ ချွေးစို အဝတ်များကို တစ်ခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်၏။ ၃၈ လက်မ ဆိုက်ကြီး ဘရာစီယာကို နမ်းကြည့်လိုက်တော့ ချွေးစော်နံနေပြီ..။ အင်း ရေချိုးရင်း လျှော်ရအုံးမည်..။ ခန္ဓာကိုယ်၌ တစ်ခုတည်းသာ ကျန် တော့သည့် ဆပ်စမိုင်နာ နီရဲရဲလေးကို ဒူးပင့်၍ ချွတ်လိုက်သည်..။ သူလည်း ချွေးနံ့ရော ဟိုအနံ့ရော မွှန်ထူနေလေပြီ..။ တဘက် တစ်ထည်ကို တန်းပေါ်မှ ယူကာ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ရှေ့မှာ ရပ်ရင်း တစ္ကိုယ္လုံးကို သန့်စင်လိုက်၏။ မှန်ချပ်ရှေ့မှာ ကိုယ်လုံးပြည့် လုံးတီးပေါ်နေသော မိမိ၏ ကိုယ္လုံးအလွကို ငေးမောရင်း တစ်ကိုယ်တည်း ပီတိ တွေ ဖြာနေမိသေး၏။ ကိုယ္ကို ဘယ်လှည့်ညာလှည့်၊ သမင်လည်ပြန်လှည့် အလှည့်မျိုးစုံဖြင့် ကြည့်၍ အားရကာမွ ချွေးစုပ်မည့် စပို့ရှပ် လက်တိုနှင့် တွေ့ရာ ထမီတစ်ထည်ကို ကောက် ဝတ်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် မီးဖိုချောင်သို့ ဝင်လာခဲ့လိုက်သည်..။
ခြင်းထဲက ချက်ပြုတ်စရာတွေကို တစ်ခုချင်း ချပြီး ခုတ်ထစ်စရာတွေကို ခုတ်ထစ်နေခိုက် ရှပ်ရှက်..ရှပ်ရှပ် ခြေသံများနှင့်အတူ အပျိုကြီး.အပျိုကြီးရေ ဟု ကျယ်လောင် ကျယ်လောင် အသံပေး၍ ဒေါ်နီမာ ဝင်လာသည်..။ အော်ဘယ်သူလဲလို့ မမမာ.လာလေ ထိုင်. သိလျှက်နှင့် ဧည့်ဝတ်စကားဆိုကာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်..။ ဒေါ်နီမာက ယောက်ျားလုပ်စာ ထိုင်စား၊ အတင်းပြော အိမ်လည်၊ ဒါသည်သာ သူမအလုပ်..။ အောင်သွယ်က ဝါသနာ ကြီးလိုက်သေး..၊ အပျိုလေးအပျိုဖြန်းတွေဆို ဒေါ်နီမာနှင့် ကြာကြာမနေရဲ..။ အောင်သွယ်လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် လင်ကိစ္စ သားကိစ္စတွေကို တစ္တစ္ခြခြ မြိန်ရေယှက်ရေ ပြောတတ်သည်..။ ဝါသနာကြီးသော မြီးကောင်ပေါက်မလေးတွေကတော့ ရှက်တတ်သော အမူအယာဖြင့် ဒေါ်နီမာ ပြောသော မစားရဝခမန်း ခြင်ထောင်ဇာတ်လမ်း တွေကို ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက်နှင့် ရင်တခုန်ခုန် အာသာမပြေ နားထောင်ချင်တတ်ကြသည်..။
ဒေါ်နီမာက မခင်သက်ဘေးမှ ဖင်ထိုင်ခုံ တစ္လုံးကို ဆွဲယူပြီး နံရံ၌ မွီကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သိလျှက်နှင့် ကြက်သားတွေလားဟု မေးလိုက်သေး၏။ ဟုတ်တယ်မမမာရေ ဒီနေ့ စနေနေ့ဆိုတော့ သင်တန်းတက်နေတဲ့ ဆွေဆွေတို့ လာမွာမို့ ဟင်းကောင်းလေး ချက်ကျွေးချင်လို့ ဆိုပါတော့. အော်.ဟုတ်ပါ့..၊ ကောင်းပါ့.၊ ဒါနဲ့ ထားအိလေးကော မတွေ့ပါလား ထားအိ သူ တို့ ကုမ္ပဏီကိစ္စနဲ့ မန္တလေးတဲ့..၊ အခုမနက်ပဲ ထွက်သွားတယ်လေ ဟင်.ဒါဆို..အိမ်မှာ အပျိုကြီး တစ်ယောက်တည်း ပေါ့ အင်း အပျိုကြီးတို့ပဲ ကောင်းတယ်..၊ လင်ယူသားမွေး ကိစ္စလဲ မလုပ်မရှုတ်တော့ဘူး..၊ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ် လပ် နော်.. စားချင်မှ ကိုယ်ကြိုက်သလို..ဟင်းဟင်း ဟု အကဲစမ်းသည့်အနေဖြင့် ဆိုလိုက်သည်..။ အပျိုကြီး က ဘာမွ မပြောပဲ အောက်ငုံ့၍ ခုတ္ထစ္စရာ အသားမ်ားကို သာ ရွေးရင်း ပြုံးနေလိုက်သည်..။ အတွင်းခံမပါပဲ စပို့ရှပ် အိအိတိုတိုကိုသာ ဝတ္ထားသမို့ ရင်သားများ အထင်းသား ပုံပေါ်နေကာ အသားတုံးကို ခုတ်လိုက်တိုင်း တုန်တုန် .. တုန်တုန်နှင့် လှုပ်ခါနေသော မခင်သက်၏ နို့ကြီး နှစ်လုံးကို တစ်ချက်ကြည့်ရင်း ဝါကျွတ်တော့မယ်နော် ဟု မဆီမဆိုင် ဆိုလေသည်..။ အပျိုကြီးက အင်း ဟု သံယောင်လိုက်၏..။ အေးလေ အပျိုကြီးဘဝနဲ့ နေတာပဲ ကောင်းတယ် မသက်ရေ သိလား..၊ ယောင်လို့များတော့ လင်ယူမယ် စိတ်မကူးလေနဲ့ ဟင်း.မမမာက ကောင်းတာကျ ထည့်မပြောဘူး..ချန်ထားတယ်..
ဒေါ်နီမာ ဆင်သော အကွက်ထဲသို့ တည့်တည့်ကြီး ဝင်လိုက်သည်..။ ဒေါ်နီမာက ချောင်းတစ်ချက် ဟန့်လိုက်ကာ အေးလေ ကောင်းတာတော့ ကောင်းတာပေါ့..ဒါပေမယ့် ခဏပါမသက်ရယ်..၊ ကောင်းတာကတော့ မသက်လည်း အပျိုကြီးပေမယ့် ဟင်း ဟင်း.. အလိုတော် မမမာနော်.ဟင်း သဘောပြောတာပါတော်၊ ခုကာလ အပျိုကြီး အပျိုကြီး ပေါင်လှန်ကြည့် လီးရာချည်းဆိုတဲ့ အ ထဲမ်ား ကိုယ့်ညီမ ပါမလားလို့ပါ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မသက္ကိုမို့ ပြောရအုံးမယ်၊ ဒီမယ်ပါတော့ကော ဘာဖြစ်သေးလဲ အေ..နော်၊ ဘယ်သူ မွ မသိပြီးတာပဲဟာ..ကိုယ္တို့ကေတာ့ ရှင်းရှင်းပဲ ဒါမျိုးဆို လက်မနှေးထဲကပဲ၊ ကိုယ္တို့မ်ား ဆိုလေ ဒီမယ်ဒီမယ် ဒါသာကြည့်..(၁၄) နှစ် သမီးကထဲက အတွေ့အကြုံ ရွိခဲ့တာ..ပြောပြောဆိုဆို သူ့ပေါင်ကြား ပုတ်ပုတ်ပြသည်..။
ဒေါ်နီမာ၏ သဘာဝကို မကြိုက်လှသော်လည်း ဒီတစ်ခါတော့ အပျိုကြီးကိုယ်နှိုက်က စိတ်ပါသလိုလိုမို့ သူပြောသမျှ မှေး၍ နားထောင်နေလိုက်သည်..။ မသက် ဘယ္လိုမွ တော့ မအောင်းမေ့နဲ့နော်.. မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြောတာ၊ မသက် ဆန္ဒရှိရင် ပြော..၊ မမမာက ပိုင်တယ်၊ ပိုင်တဲ့ ယောက်ျားတွေ အများကြီး ငယ်ငယ္လား၊ ရွယ်တူလား၊ ဦးဦးအရွယ်လား၊ ပြော အပျော်လဲရတယ်၊ ရေရှည်လဲ ရတယ်.. ရည်ရွယ်ထားရင် လက်ထပ်ချင်လဲ ရတယ် သိလား ဟု တစ်ယောက်ယောက် ကြားသွားမည်ကို စိုးရိမ်ဟန်ဖြင့် အသံကို အုပ်၍ ပြောလေသည်..။ ရပါတယ်မမမာရဲ့ ဘာရပါတယ်ဟုတ္လား၊ အပျိုကြီး၊ ခေါ်ခဲ့လို့ ရပါတယ်လားဟင် ဟုတ် ပါဘူး. မမမာရဲ့.. ဒီလိုပဲ နေနေကျပဲ ဥစ္စာ အဲဒါပြောတာပေါ့ မသက္တို့ ..အဲဒါတွေ ခက္တာ၊ ဒီမယ် .. မမမာကို မယုံလို့လား.. ဟုတ်ပါဘူး အေးဆေးပဲ နေချင်လို့ ဖြစ်ရပြီ.. ဒီမယ် မသက္က အပျိုကြီးဆိုပေမယ့် တကယ့်ကို လုံးကြီးပေါက်လှကြီးမို့ ကိုယ္တို့က ပြောတာ..၊ ဒီအတိုင်းကြီး ပစ်ထားလိုက်တော့မှာလား ၊ နှမျောစရာ. မခင်သက်က ဘေးသို့ စင်သွားသော ကြက်သားတုံးကို မမှီမကမ်း လှမ်း ဆွဲလိုက်ရာ စောင်းလဲမလို ဖြစ်သွားပြီးမှ ထိုင်ခုံပေါ် ဖင်ထိုင်ရင်း ကျန်သော အသားတွေကို ခုတ်နေပြန်သည်..။
လဲမလိုလို ဖြစ်သွားသောကြောင့် သူမ၏ ထမီက ဖရိုဖရဲ အနားစ ပုံပ်က်သြားကာ ပြန်ထိုင်လိုက်တော့ အောက်စလွတ်၍ နေတော့သည်..။ လက်မှာလဲ ဟင်းကိုင်နေခိုက်မို့ ပေပွနေသည်..။ ပြင်မထိုင်အား။ ဒေါ်နီမာက ဟောင်းလောင်းကြီး ပေါ်နေသော မခင် သက် ပေါင်ခွကြားကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲက ပြုံးမိသည်..။ မခင်သက်ကတော့ သိဟန္မတူ..၊ သိလည်း မိန်းမချင်းမို့ အရေးမကြီးသလို ဆက်နေလိုက်ဟန် တူပါရဲ့..။ ဝါဝင်းသော ပေါင်တွင်းသားနှစ်ဖက်ကို အလင်းရောင်ဖြင့် အထင်းသား မြင်နေရသည်..။ စောက်ဖုတ်ကို အပီအပြင် မမြင်ရသော်လည်း စောက်ခုံနှင့် စောက်မွှေးတွေကိုတော့ မဲမဲချိတ်ချိတ် လိမ်လိမ်ရှုတ်ရှုတ်ကြီး တွေ့နေရ သည်..။ ဟင်းချက်နေရင်း ဒေါ်နီမာက စကားလုံးဖြင့် လာပြီး ဆွခဲ့သည်မို့ ကြုံဖူးခဲ့သော အဖြစ်အပျက်တို့ကို တွေးမိရင်း မခင်သက် တစ်ယောက် တစ်ကိုယ်တည်း ရင်ဖိုနေမိရတော့သည်..။
တစ္မနက္လုံး အချက်အပြုတ် ကိစ္စများနှင့် နပမ်းလုံးနေရသည်..။ မီးဖိုချောင်ကိစ္စတွေ ပြီးသွားကာမှ လျှော်ဖွပ်စရာတွေ လျှော်ဖွပ်၊ ရေချိုးပြီး သနပ်ခါးလေး ဘာလေး လူးရန် မှန်တင်ခုံရှေ့ ထိုင်ဖြစ်ရတော့သည်..။ ရင်ရှားထားသော ရေစိုထမီကို လဲလိုက်ပြီး အခြောက်လဲလိုက်သည်.။ ဝတ်ပြီးကာမှ ထမီကလည်း ကြဲထားတာ အကြီးကြီး..။ မတတ်နိုင်..၊ ဘယ်သူရွိတာမွတ္လို့။ ထမီအကြဲကို လှည့်ဝတ်လို့လဲ မလုံ..၊ အကြဲက နှစ်ကွဲ၊ ရှေ့ပို့တော့ နောက်က မလုံ၊ နောက်ပို့တော့ ရှေ့ကမလုံ၊ ကဲဟယ်..ဟု ဆိုကာ ရှေ့နောက် တ စ္ကြဲစီ ပို့ရင်း ရင်ရှားလိုက်သည်..။ ပြီး.. သနပ်ခါး သွေးလိုက်၏။ မျက်နှာကို လူးပြီး ကိုယ္လုံးကို လူးရန် ထမီစကို ဖြည်ချလိုက်သည်..။
ဖွံ့ဖြိုးဝိုင်းစက်သော နို့ကြီးနှစ်လုံးက ခန့်ခန့်ကြီး ပေါ်လာ၏။ မှန်ထဲမှာ ဖွေးဖွေးမို့မို့ကြီး ပြူထွက်နေသော ကိုယ့်နို့နှစ်လုံးကို ငေးစိုက် နေရင်းက ကျောက်ပြင်ပေါ်မှ သနပ်ခါးကို လက်ဝါးဖြင့် ပွတ်၍ ဆြဲလိုက္ကာ လက်မောင်းသား အိအိနှင့် ကျောပြင် ဂုတ်သားတွေကို လူးနေခိုက် ရှပ်ရှပ်..ရှပ်ရှပ် ခြေသံက ပေါ်လာပြန်၏။ အင်း..မမမာတစ်ယောက် ပြောရတာ အားမရေသးလို့ တစ်ခါလာပြန်ပြီ ထင် ပါရဲ့.. ဟု တွေးရင်း ကုန်သွားသော သနပ်ခါးအတွက် နောက်တစ်ကျော့ သွေးလိုက်ပြန်သည်..။ ခြေသံက အခန်းဝ၌ ရပ်သွား၏။ ထိုခြေသံသည် မခင်သက် ထင်ထားသလို ဒေါ်နီမာ၏ ခြေသံ မဟုတ်ဘဲ ပိုင်စိုး၏ ခြေသံဟု သိခဲ့လျှင် မခင်သက်တစ်ယောက် ဤသို့ ပရမ်းပတာကြီး နေမည့်ပုံ မပေါ်ပါ..။ ခုတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ကြုံရပြန်ချေပြီ..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်..။ ပိုင်စိုးသည် အရင် တစ်ခါ ကြုံခဲ့ဖူးသည်မို့ ဒီတစ်ခါ ဘာသံမွ မပေးတော့ဘဲ ဝင်လာခဲ့သည်..။ စင်စစ် ပိုင်စိုး မရိုးသား၊ မရိုးသားခြင်းက ယခု ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုလေပြီဟု ဆိုရမည်လား မသိ၊ တံခါးဝသို့ ပိုင်စိုး အရောက် မခင်သက်တစ်ယောက် ခေါင်းကိုငုံ့၍ စိတ်ပါက်ပါ သနပ်ခါး သွေးနေသည်..။
အသံမပေးသေးဘဲ ထိုမြင်ကွင်းကို ကြည့်နေမိ၏။ ဒေါ်ခင်သက်က ရှေ့ကိုသာ အားစိုက်ပြီး သွေးနေသည်မို့ ပိုင်စိုး ရောက်နေတာ မသိ၊ သူမ၏ ထမီအကြဲထဲမွ မို့အစ် ပြူထွက်နေသော ညာဘက်ခြမ်း တင်သားဖွေးဖွေးကြီးနှင့် အားစိုက်၍ ကုန်းသွေးလိုက်တိုင်း လှုပ်လှုပ်နေသော မှန်ထဲမှတဆင့် မြင်ရသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ပိုင်စိုး ငေးကြည့်နေရင်း အာခေါင်များ ခြောက်လာပါတော့သည်..။ ခဏကြာမှ ဒေါ်ခင်သက်တစ်ယောက် စိတ်ကူးဝင်သည်..။ စောစောက ခြေသံကြားပါတယ်ဟု တွေးမိရင်း ခေါင်းကို ဆတ္ခနဲအေမာ့၊ မှန်ရိပ်ထဲ ပေါ်လာသော ပိုင်စိုး၏ မျက်နှာကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ မခင်သက် ပြာပြာသလဲ ဖြစ်သွားကာ ပေါင်ရင်းအထိ လျှောကျ နေသော ထမီကို ကမန်းကတန်း ကောက်ဝတ်သည်..။ သို့ပေမယ့် ဖြစ်သလိုကြီး။ မောင်.မောင်..ပိုင်စိုးဘယ်.ဘယ္တုံးက ဟု ပလုံး ပေထြး ရေရွတ်သလိုကြီး မေးလိုက်ရင်း ဒိန်းဒိန်းခုန်သွားသော ရင်ကို ငြိမ်သွားအောင် ကြိုးစားရသည်..။ ခုခုပဲ..ဒေါ်အဲလေ မမ သက်ဒီနေ့ ဆွေဆွေ့ သွားခေါ်ရင်း လမ်းလဲကြုံနေတာနဲ့ ဒီဒီကို ဝင်လာတာပါ ဟု ပိုင်စိုးကလည်း အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ ဆိုလေ သည်..။
မခင်သက်တစ်ယောက် ပိုင်စိုးရှေ့၌ မလုံမလဲ အဝတ်ဖြင့် ရင်ခုန်လှုပ်ရှားနေကာ ဘာလုပ္လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းပင် မသိတတ်အောင် ဖြစ် နေသည်..။ မောင်မောင်ပိုင်စိုး အပြင်အပြင် ကပဲ ခဏ.စောင့်နော်. ဟု တုန်ဟိုက်စွာ ဆိုသော်လည်း ပိုင်စိုးက မလှုပ်..၊ ကျောက်ရုပ်။ သူမကိုသာ စူးစူးနစ်နစ်ကြီး စိုက်ကြည့်နေတော့သည်..။ ခင်သက် ဗြုန်းကနဲ ရပ်လိုက်မိသည်။ ဒီတော့မှ သူ့ထမီက ကွဲ နေတာ သတိရပြီး ခုတင်ခြေရင်း၌ လွှားတင်ထားသည့် ထမီတစ်ထည်ကို ကုန်း၍ ဆွဲလိုက်ရာ ကျောပြင်နှင့် နောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး တင်းသွားပြီး တင်ပါးနှစ်ခုကြားနှင့် တည့်နေသော အကွဲစကြားမှ သွေးကြွစူအက်နေသော သူမစောက်ဖုတ်ကြီးမှာ မို့ခုံးပြူထွက်လာ တော့သည်..။ ပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုးကာမှ ဆေးအတွက် လေးရလေပြီ.။ ပိုင်စိုး စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေသည်..။ ရင်ထဲ မှာ ပူကနဲ ဖြစ်သွားကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ္လိုမွ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ခပ်ကုန်းကုန်းကြီး ဖြစ်နေသော မခင်သက်ရှိရာသို့ သွက်သွက်ကြီး လှမ်းသွားမိလေ၏။ သူမ ဆတ္ကနဲ မတ်တတ်အရပ် ပိုင်စိုးက နောက်မှ ဝင်၍ အပွေ့၊ မခင်သက်၏ နောက်မှ သိုင်း၍ ပွေ့ဖက် ထားလိုက်မိသည်.။ မထင်မှတ်သော အဖြစ်အပျက်များကြောင့် အပျိုကြီးလည်း ကြောင်သွားကာ ပိုင်စိုးကို တတောင်ဖြင့် တွက် လိုက်လေသည်..။
အြတ္ကနဲ မြည်သွားပြီး သိုင်းထားသော လက်နှစ်ဖက်မှာ ပြေကျသွား၏။ ရင်ခုန်တာရော စိတ်ဆိုးတာရော ပေါင်းပြီး အပျိုကြီးခမျာ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်..။ ပိုင်.ပိုင်စိုးမင်း.မင်း. ဟု ဆိုကာ ပါးကိုရိုက်မည်ဟု လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးကာမှ ဘယ္လိုက ဘယ်လိုဖြစ်သည်မသိ၊ မခင်သက်တစ်ယောက် မျက်နှာကို လက်ဝါးဖြင့် အုပ္ကာ ရှိုက်နေပါတော့သည်.။ ပိုင်စိုးလည်း ပ်ာပ်ာသလဲ ဖြစ်သွားကာ မမသက်က်..ကျနော်ကျနော် တောင်းပန်ပါတယ် ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှန်း မသိ ဖြစ်သွားလို့ပါ ကျနော့်အပြစ်ပါ မမသက်ရယ် ကျနော့်ကို ရိုက်ပါရိုက်လိုက်စမ်းပါဗျာ. ပိုင်စိုးက မခင်သက်ရှေ့သို့ တိုး၍ ပါးကို အပ်လေသည်။ တကယ်တော့ အပျိုကြီးကိုယ်တိုင်လည်း ဘာဖြစ်၍ ဘာဖြစ်မှန်း သူကိုယ်တိုင် မသိ၊ သူ့ကိုလည်း မရိုက်ရက်ပါ..။ ရိုက်ရန်လည်း မရည်ရွယ်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ ထူပူသွားပြီး အရှက်ရော ရမ္မက်ပါ ပေါင်းစပ်မိပြီး ဒေါသဘက်သို့ ကူးသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါချေ၏။
အတန်ကြာမှ မခင်သက် အငိုတိတ္ကာ စိတ်ဆိုးပြေသွားသည်။ မခင်သက်က လက်ထဲပါလာသော ထမီကို လဲ၍ ဝတ်ရန်ပြင်ပြီးမှ. မင်း ဟိုဘက်ခန်း သွားနေကွာ.. ဟု ဆို၏။ ကြာ ဟူသော စကားလုံးကို မခင်သက် တမင်တကာ သုံးလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ စိတ်မဆိုး တော့ဘူး ဟူသည့်သဘော၊ ခ်က်ဆို နားခြက္က မီးတောက်သော ပိုင်စိုးက .. သြားဘူး ဟု ညုတုတု ဆိုလိုက်၏။ ဒါဆို.. ဟိုဘက်လှည့် ဟု ဆိုတော့လည်း လှည့်ဘူး တဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဈေးဆစ်နေကြသည်..။ စောစောက သူ့ကို ရိုက်မလို လုပ်ခဲ့တာ သူမ ပင် မဟုတ်တော့သလို မခင်သက်တစ်ယောက် မပွင့်တပွင့် ပြုံးကာ ထမီကို လဲလိုက်တော့သည်..။ ရွပ္ကနဲ လွပ္ကနဲ ပွင့်သွားသော ရင်သား အညွန့်ဖွေးဖွေးကို မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သော ပိုင်စိုးကလည်း ငါးဖယ်ပြုံး ပြုံးလို့.။ သြား. လူကို လိုက်ကြည့်နေ ဆွေ ဆွေလာမှ နင့်ယောက်ျား နင်နိုင်အောင်ထိန်းလို့ ပြောရအုံးမယ်ဟင်း ပိုင်စိုးက ဘာမှမပြောပဲ ရှေ့သို့ တိုးလာသည်..။ တစ်လှမ်းနှစ် လှမ်း မခင်သက်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် ဆုတ် ဆုတ်ပေးနေမိသည်။ ခုတင်ဘောင်နှင့် ထိသွားတော့ ဆက်ဆုတ္လို့ မရေတာ့။ ပိုင်စိုးက မခင်သက်နှင့် ကပ်သွားအောင် မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီး သူမ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ဖြဖြ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း.
မမ.မ..သက် ပိုင်စိုးက လွိုက္ဖိုစြာ ဆိုလိုက်၏။ သြားသြားကြာ. မောင်ပိုင်စိုး မလုပ်နဲ့ ဖယ်.ဖယ် ပါ.. မခင်သက်က မောလျှသော အသံဖြင့် ရေရွတ်ရင်း လက္ကို ဖယ်သော်လည်း လက္က ပြုတ်မသွားပါချေ..။ ပို၍ ပင် တင်းကျပ်သွား၏။ လူတွေ ဝင်လာရင် မ ကောင်းဘူးကွာ. ဖယ်ပါပြီးတော့ မင်းက ငါ့တူမ ယောက်ျားလေ၊ ပိုင်စိုး. ဒေါ်ဒေါ် တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ နော် လွှတ်နော် မခင်သက် က အချိုသတ်ကာ ငြင်း၏။ ပိုင်စိုးက နောက်မဆုတ်ပါချေ။ သူမ၏ ကျောပြင်ကို လက်ပြောင်းပြီး ခပ်တင်းတင်း ဆွဲယူလိုက်ရာ မ ခင်သက်၏ ရေဆေးငါးကြီးပမာ တစ်လုံးတစ်ခဲနှင့် အိစက်နေသော မထိရက္စရာ ကိုယ်လုံးကြီးကို ဖက်မိလျှက်သား ဖြစ်ရချေပြီ..။ ပိုင်စိုး.မမသက် ပြောနေတယ်..၊ ဒေါ်လေး ပြောနေတယ်နော် ဖယ်ပါလို့ဆို.. မသင့်ပါဘူး..ဖယ္ကြာ ဒေါ်လေးရော၊ ဒေါ်ဒေါ်ရော၊ မမ သက်ရော ဝေါဟာရမျိုးစုံ သုံးကာ မခင်သက် ရုန်းရှာပါသေး၏။ လှုပ်ခတ်နေသော ရင်က တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်နေသည်။ ပြီးတော့ ပိုင်စိုး ရင်အုပ်နှင့် ပိညှပ်နေတော့ ရုန်း၍လည်း မလွယ်ပါတကား..။ ပိုင်စိုးက သူမ၏ ခါးနှင့် မို့ကားထွားအိသော တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို ခပ် ကြမ်းကြမ်းလေး ဖိဆုပ်နှိပ်နယ်ရင်း. မမ.မ မသက် ကျနော့်ကို စိတ်ဆိုးလားဟင် ဟု မေးတော့..၊ အင်း ဟု တစ်ခွန်းသာ ဆိုရင်း ရုန်းကန်လိုက်ပြန်သည်။
ထိုသို့ ရုန်းမိကာမှ ခြေမခိုင်သလို ဖြစ်ပြီး ယိုင်ကျသွားတော့သည်.။ ပိုင်စိုးက အခွင့်ကောင်းကို အလွတ်မပေးဘဲ ယိုင်သွားသော မ ခင်သက် ကိုယ္လုံးကို ခုတင်ပေါ် လွဲသိပ္လိုက္ကာ သူမထက်သို့ တက်ပြီး မှောက်လိုက်လေသည်..။ သူမ မျက်နှာပေါ် အုပ္မိုးကာ ပါးပြင်နှစ် ဖက်ကို အငမ်းမရ နမ်းပစ်လိုက်မိတော့သည်..။ ရှင်းသန့်ပြီး သနပ်ခါးလိမ်းပြီးစမို့ မွှေးလို့ ကြိုင်လို့ သူ့ကိုယ်ကတော့ ချွေးနံ့တွေနဲ့ နံစော်နေမလား။ ဒေါ်ခင်သက် ရင်တွေ အရမ်းဖိုသွားရသည်..။ ခုလို ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အနမ်း မခံရတာ ကြာပြီလေ..။ အောက်မှ မလှုပ်သာ လှုပ်သာ လှုပ်ရင်း ရုန်းနေမိသော်လည်း မိန်းမနှင့် ယောက်ျား အားချင်း မမျှပါချေ..။ တကယ်တော့ ရုန်းသာ ရုန်းနေရသည် စိတ်ထဲက သိပ္မပါလွေခ်..။ ပိုင်စိုးက သူမနှုတ်ခမ်းကို ငုံခဲ၍ စုပ်လိုက်လေသော်ကား အပျိုကြီးခမျာ တစ္ကိုယ္လုံး ရှိန်းဖိန်း သွားကာ ထွန့်ထွန့်လူးလူး ဖြစ်သွားရသည်..။ ပိုင်စိုး. တော်ကွာနော် ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်ပါတော့..၊ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး..၊ ပြီးတော့ တံခါးကြီးကလဲ ပွင့်လို့. ပိုင်စိုးက ခုတင်ပေါ်မှ ခုန်ဆင်းကာ အပြင်သို့ ထွက်သွားသည်..။ တစ်မိနစ် မကြာလိုက်..၊ ပြန် ရောက်လာပြန်သည်..။ ပိုင်စိုး ပြန်ရောက်လာတော့ မခင်သက်က ခုတင်ပေါ်မှာ ပက္လက္ကေလး မှိန်းနေရှာသည်..။ ရင်ရှားထားသော ထမီကို အထက်သို့ရောက်အောင် ဆွဲတင်လိုက်ရင်း ဝင်လာသော ပိုင်စိုးကို ကြည့်ကာ . ဘာလုပ်တာလဲ.. ဟု ဆို၏။ တံခါး ပိတ်ခဲ့ ပြီလေ ပိုင်စိုး ပြောပြောဆိုဆို ခုတင်ပေါ် တက်လှဲလိုက်ကာ လည်ပင်းရောက်အောင် မတင်ထားသော ထမီစကို ဆတ္ကနဲ ဆွဲပြီး လျှောချလိုက်လေရာ ရင်သားနှစ်မွှာ ဘြားကနဲ ပေါ်သွားသည်..။
ပိုင်စိုးကြာမင်း ပြောစကားလဲ နားမထောင်ဘူးဟင်း. ရီဝေသော မျက်ဝန်းများဖြင့် မျက်စောင်းလှလှ ထိုးနေခိုက် ပိုင်စိုးက အင်္ကျီနှင့် ပုဆိုးကို ခပ်သွက်သွက် ချွတ်ပစ်လိုက်လေတော့သည်..။ သူ့ပေါင်ကြား၌ ဆတ်တောက် ဆတ်တောက်နှင့် မာန်ဖီနေသော နီညို တုတ်ခိုင်လှသည့် လီးကြီးကို တစ်ချက် ဝေ့ကြည့်ပြီးမှ .. မကြည့်ရဲဘူး ကြာ ဟု ဆိုကာ မျက်နှာကို လက်ဝါးဖြင့် အုပ်လိုက်လေ သည်..။ ပိုင်စိုးက သူမကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်ပင့်မကာ ထမီကို အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်လေရာ တင်ပါးနှင့် ထစ်ငြိနေသည်မို့ မခင် သက်က တင်ကို ကြွ၍ ပေးလိုက်မိသည်..။ ပိုင်စိုးက ထမီကို ကွင်းလုံးကျွတ်သည်အထိ ဆွဲချွတ်ပြီး ခုတင်အောက် ပုံထားလိုက် သည်..။ ခုတော့ မမသက် တစ်ယောက် ဆွေဆွေ့တာဝန်ကို ထမ်းရချေတော့မည်..။ ဆွေဆွေ့နေရာမှာ ငါပဲ ဖြစ်လိုက်ချင်ရဲ့ဟု မချင့်မရဲ ပေါ်ခဲ့ဖူးသော စိတ္ကူးတို့ တကယ်ဖြစ်လာချေတော့မည် ထင်ပါရဲ့။ သင့်၏ မသင့်၏ မစဉ်းစားချင်တော့ပါ..။ ယခုအချိန်၌ ရမ္မက်မီးလျှံက ဝါးမြိုတောက်လောင်နေသည်မို့ ဒီမီးကိုသာ ငြိမ်းပစ်လိုက်ချင်၏။ ဒါပဲသိတော့သည်..။
ဆွေဆွေ သင်တန်းနားရက်တွေမှာ ပိုင်စိုးက အိမ်ခေါ် ခေါ်လာပြီး သူတို့လင်မယား တစ်ပတ်တစ်ခေါက် အိပ်ကြသည်..။ ခွဲနေရသော တစ္ပတ္စာကို အတိုးခ်၍ လိုးကြတိုင်း တစ်ဖက်ခန်းမှ ဒေါ်လေးသက်တစ်ယောက် စိတ်တွေ ဂနာမငြိမ် ဖြစ်ရသည်..။ အပျိုကြီး တန်မဲ့ ချောင်းကြည့်ဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာ ကြာပြီ..။ အဲဒီကတည်းက မြင်ရဖန်များခဲ့သော ပိုင်စိုးလီးထစ် နီညိုကြီးကို မေ့မရ ဖျောက်မရ ဖြစ်ခဲ့ရသည်..။ ပိုင်စိုးလည်း ထူးမခြားနားပါပေ..။ ဆွေဆွေ့ကို သင်တန်းကိစ္စနှင့် ပစ္စည်းတွေ သယ်ပို့ပေးစဉ် အေခါက္က ဖြတ်ကနဲ အိမ်ထဲ ဝင်လာခိုက် ဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ် ရုံမက တင်ပါးကြီးနှစ်လုံးပါ ပြူးနေအောင် ပေါ်နေသည့် မခင်သက်၏ စြဲမက္စရာ ခန္ဓာကိုယ် အလှကို မြင်ခဲ့ရချိန်မှစ၍ ထိုမြင်ကွင်းက လွှမ်းမိုးနေခဲ့သည်..။ ဆွေဆွေတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်စလုံး တစ်မျိုးစီ လှကြပါ၏။ ထား အိက အေရိုးဗစ်လည်း ကစားထားသူမို့ အဟိုက်အရှိုက် အဖိုတွေက တင်းတင်းပြည့်ပြည့် စွဲမက်ဖွယ် ကောင်းသလို ဆွေဆွေက လည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးတာတောင်မှ အချိုးအစားမပျက်ပဲ လိုး၍ မဝအောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် မယား..။
အင်း.ဒေါ်လေး..မမသက္က ကော..။ အပျိုကြီး စာရင်းဝင်နေသော်လည်း အစ်မကြီး အရွယ်မျှသာ..။ တည်တည်ခန့်ခန့်၊ ထြားထြားမို့ မို့၊ အိအိစက်စက် တစ်လုံးတစ်ခဲကြီး လွေသာ အလှပိုင်ရှင်တစ်ယောက်..။ စိတ်ထဲကတော့ စိတ်ကူးနေခဲ့တာ ကြာပြီ..။ ကြာပြီဆို သူမ၏ အားမနာစတမ်း ကြမ်းပစ်ချင်စရာ ကောင်းလှသော ရေဆေးငါး ခန္ဓာကို အတွင်းကျကျ သိခဲ့မြင်ခဲ့ရပြီးကတည်းက ဆိုပါ တော့..။ယခုတော့ .. ထိုရေဆေးငါးကြီးကို စားဖို့ ကိန်းကြုံပါပြီ..။ ပိုင်စိုးသည် ရေဆေးငါးကြီးကို စိတ်တိုင်းကျ စားရန် အကြေးခွံခွာ သည့် အနေဖြင့် ပက်လက်ကြီး ဖြစ်နေသော မခင်သက်၏ ကိုယ်လုံးအိအိကြီးပေါ်သို့ အားပါပါ ပစ်၍ မှောက်လိုက်သည်..။ အိ..ကနဲ အသံထွက်သွားပြီး. မကြမ်းနဲ့ကွာ၊ နွားသိုးကြိုးပြတ်.တကထဲမွ…ဟင့် မခင်သက်က မျက်စောင်းလှလှ တစ်ချက်ထိုး လိုက်လေရာ သကောင့်သား ပိုင်စိုးတစ်ယောက် သဘောတွေ့ မနောခွေ့ သွားရပြီ မမသက္ကို အပျိုကြီးဘဝက ချွတ်ပေးချင်လို့ပါမမ ရဲ့ ပြောပြောဆိုဆို လေးငါးချက်မျှ ဆက်၍ ဆောင့်နေရာ မခင်သက်ခမျာ သဘောကျလျှက်ကပင်. ကြည့် ပြောလေကဲလေ..နွားသိုး လေးတော့လား.. ဤသို့ ဆိုကာ သူ့ကျောကို လက်သီးဆုတ်နှင့် ထုကာ ထုကာ မကြာခင်ဖြစ်လာတော့မည့် အရေးအတွက် ရင်တွေ ခုန် ဖင်တွေတုန်လျှက် ပြုံးနေမိတော့သည်..။
ပိုင်စိုးက မခင်သက်၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို မျက်နှာအပ်လျှက် ဘယ်ညာလူးလိုက်သည်..။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တစ္လုံးစီ လူးလှိမ့်ပေးလိုက် သည်..။ နို့သီးခေါင်းကလေးများကို လျှာဖြင့် ကလိ၍ သွားဖြင့် မနာအောင် ငုံခဲပေးသည်.။ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ခုလိုမျိုး ကလိတိတိဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ ဆွပေးနေသော အရသာကို မခံစားရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ မခင် သက်ခမျာ မနေတတ်လောက်အောင် မရိုးမရွဖြစ်ကာ တစ္ကိုယ္လုံး ကြွကြွရွရွ တွန့်လိမ်နေသဖြင့် ပိုင်စိုးက သူ့ကိုယ်လုံးဖြင့် ဖိကာ ဖိ ကာ ဆောင့်ပေးထိန်းပေးနေရသည်..။ ခလုတ္ကို ဖွင့်လိုက်ပြီမို့ မီးကလည်း ပွင့်ခဲ့ချေပြီ..။ မခင်သက်၏ ပေါင်နှစ်လုံးအရင်းပိုင်း၌ စိုစွတ်သော အရည်ကြည်တို့ စိမ့်ကနဲ စိုလာပြီမို့ အပေါ်မှကပ်၍ ဖိထားသော ပိုင်စိုး၏ ပေါင်ရင်းဆီးစပ်တို့၌ အစိုဓာတ် ကူးစက်ခဲ့ သည်..။ ယခုလိုအချိန်၌ ကိုယ္က မလုပ်ချင်ပါဘူး ပြောလျှင်တောင် ထိုင်ရှိခိုးကာ လိုးပေးဘို့ တောင် တောင်းပန်တော့မည်ကို သိ သော ပိုင်စိုးသည် အပျိုကြီးကို ရွသည်ထက် ရွလာအောင် အစွမ်းကုန် နှိုးဆွပေးနေတော့သည်..။
ဝမ်းပြင်သားတစ်လျှောက် ပတ်ပတ်လည် သွားအောင် လျှာဖြင့် လျက်၍ ကလိပေးသည်..။ ချက်တွင်းနက်နက်ကလေးကို ပါးစပ် ဖြင့် ကလေးမြှူသလို မြှူနမ်းပေးလိုက်ရာ ဒေါ်ခင်သက်ခမျာ ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်လျှက် ဖြတ်ဖြတ်လူးကာ ကြက်သီးတွေ ထသွားရ တော့သည်..။ ပိုင်စိုးက မျက်နှာကို ဖြေးဖြေးချင်း အောက်သို့ ဆွဲချလာရင်း မခင်သက်၏ မိန်းမအင်္ဂါစပ် လွင်ပြင်ပေါ် မှောက်၍ ပွတ် ပေးလိုက်သည်..။ ရေချိုးသန့်စင်ပြီးစမို့ အညစ်အကြေး ကင်းစင်၍ လှပလွန်းသော မမသက်၏ စောက်ဖုတ်ကြီးက သူ့ကို ကြိုဆို နေသည်။ သူက မမသက် စောက်ဖုတ်ကြီးကို မျက်နှာအနည်းငယ် ခွာလျှက် အနီးကပ် ကြည့်ရင်း တံတွေးကို မျိုချလိုက်သည်..။ မခင်သက်ကမူ လက္ကို ပတ္တာယှက်သလို ယှက်၍ ခေါင်းတင်ကာ သူမ၏ လျှို့ဝှက်ရတနာကို တပ္မက္စြာ စူးစိုက်ကြည့်နေသော ပိုင် စိုး၏ မျက်နှာကို ကြည့်နေမိသည်..။ အင်း..ပိုင်စိုးလေး.ပိုင်စိုးလေးဒီနေ့ည ဆွေဆွေလာတဲ့အထိတောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘူးအေး လေ..သူ့ခမျာလဲ မိန်းမနဲ့ ကြာကြာခွဲနေရတော့ ဆာနေရှာမှာပေါ့. မိန်းမပီပီ ကရုဏာ စိတ်ကလေးဖြစ်ကာ သူစိတ်ရှိသလို လိုးပေ စေတာ့၊ သူ့စိတ်တိုင်းကျ ငါ အလိုဖြည့်လိုက်မယ်ဟူသော သဘောဖြင့် ကျေနပ်စွာပင် မှေး၍ နေလေတော့သည်..။
ပိုင်စိုးက မခင်သက်၏ အရည်ကြည်များ စိုရွှဲနေပြီး ဖူးဖူးမို့မို့ကြီး ခုံးကြွနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို တဝကြီး ကြည့်ပြီး အစေ့လေး ကို လျှာဖြင့် တို့ထိကစားပေးလိုက်ရာ အပျိုကြီးခမျာ တစ္ကိုယ္လုံး ထူပူသြားကာ ဘေးသို့ကားစွင့်လျှံကျနေသော တင်ပါးသားကြီးများ ကျုံ့၍တက်သွားသည်အထိ နေမထိ ထိုင်မသာ လူးလွန့်သွားရရှာသည်..။ ပိုင်စိုးက တဆက်တည်းပင် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်း ကြီး ပေါ်သွားအောင် လက်ချောင်းများဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး လျှာကိုလိပ်ကာ ပေါ်လာသည့် အတွင်းသားနုနုထဲသို့ သွင်း၍ ကစားလိုက်သည်..။ ပိုင်စိုး၏ ကလိချက် ထိချက်များက မခင်သက်၏ အဓိက ခလုပ်များကိုချည်း ကိုင်နေသလို ဖြစ်ရကား အစာငတ်နေသော ကျားသစ်မတစ်ကောင် အစာကောင်းကို တွေ့ရာ၌ ဣနြေ္ဒမရအောင် ဖြစ်သွားသကဲ့သို့ ပြတ်လပ်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည့် မမသက်တစ်ယောက် ပိုင်စိုး၏ အကောင်းစား ပြုစုပေးမှုကို ဖင်တကြွကြွ ရင်တမမဖြင့် တစ္ကိုယ္လုံး တွန့်လိမ် ကော့ပျံကာ ဖြတ်ဖြတ်လူး ဆတ်ဆတ်ခါဖြင့် ဖီလင်တွေ အဆင့်ဆင့် တက်ရပါချေပြီ..။
အားမလို အားမရဖြစ်လှစွာ ပိုင်စိုး ခေါင်းကို မမှီမကမ်း ဆြဲ၍ ဆံပင်တွေကို ဖွချေပေးနေမိသည်..။ အပျိုကြီးတစ်ယောက် နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်နေပြီကို သိသော ပိုင်စိုးက အရွိန္ကို မလျှော့ပဲ လက်နှစ်ဖက်ကို ရင်ညွန့်ဆီသို့ လှမ်းလိုက်သည်..။ သူ့လက်နှစ် ဖက်ထဲ ပြည့်လျှံနေအောင် ဆုတ်ကိုင်မိသော မမသက်၏ အိစက်ထွားကြိုင်းလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို အားမနာတမ်း ဆုတ်ချေပွတ် လှိမ့်ပေးရင်း သူမ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလည်း စိတ်တိုင်းကျ မွှေ၍ လျက်လိုက်၊ ကလိလိုက်၊ သွားဖြင့် ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ကိုက် ပေးလိုက် လုပ်နေလေရာ ခငြေ်္သ့မင်းပြုသမျှ နုနေရရှာသည့် သမင်ငယ်လေးပမာ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းမှုတ်၍ လူးကာလွန့်ကာ ဖြင့် မမသက်တစ်ယောက် ကြိတ်မှိတ် ခံစားနေရရှာပါလေ၏..။ ပိုင်စိုးကမူ မလျှော့ရေးချ မလျှော့..။ ကြာသော် မမသက်တစ် ယောက် မနေနိုင်လွန်းတော့ပြီမို့ သူပြုသမျှ အကောင်းချည်း ဖြစ်နေသော်လည်း ဒီလောက်ကြီး ကောင်းလွန်းနေခြင်းကို လုံးဝ သည်းမခံနိုင်တော့ပါ..။ ပါးစပ်မှ တအီးအီး၊ တအင်းအင်း ညည်းညူနေရာမှ . မောင်.မောင်လေး ပိုင် စိုးအား.အား..ရွီးကျွတ် ကျွတ် အ.ရွီး မောင်လေးတော်တော်တော့ကွာ မမသက်အီး.ဟီး.ဘယ္လိုမွ မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ် မခင်သက်တစ်ယောက် ဤကဲ့သို့ တားမြစ်ရသည်အထိ ဖြစ်လာပါတော့၏။
ဒါတောင် ပိုင်စိုးက မလျှော့သေးဘဲ နှစ်မိနစ်သာသာမျှ ဆက်၍ ဆုတ်ပေး စုပ်ပေး မှုတ်ပေး နေပြန်ရာ မမသက္ခမ်ာ ဘာမွ မတတ်နိုင် တော့သလို ဆက်၍သာ အဆြ ခံနေရရှာသည်..။ မောင်လေးမ..မမ ကို သနား ပါကွယ် နော်အ..အား ဘယ်.လိုမွ မေန နိုင်တော့ဘူး လိုး .လိုးတော့နော်လိုးပါတော့ ကြာ နော်..မောင်.မောင်လေးအား..အင်းရွီး ကျွတ်ကျွတ် မမ..ကျနော် မှုတ်ပေးတာ ကြိုက်လား ဟင် ကောင်းလား မခင်သက်တစ်ယောက် တော်တော်နှင့် စကားမပြန်နိုင်ရှာ။ အတန်ကြာမှ ဟင်း ခနဲ သက်ပြင်းရှည်ကြီး မွုတ္ထုတ္ကာ. သေ..သေတော့မယ် ဒီမွာ မ.မမ ဘယ်လောက်ထိ ကောင်း ကောင်းနေလဲ မင်း မသိဘူး.. ဟင်း ဟင်းဟဲ.အင်းဟင်းလိုး လိုးပေးပါ တော့ မောင်လေးရယ်နော်. နော်လို့.ဟင်းတကထဲမွ လူကို ဣနြေ္ဒမရအောင်ကို မှုတ်တော့တာပဲတော်တော်ဆိုးတယ် လုပ်လုပ် တော့ မြန်မြန်လေးဟင်း အင်း မောင်လေးက မမသက် အရသာ ရှိသထက် ရှိအောင်လို့ပါ..၊ မမကလဲ ဒီလောက်ကောင်းနေတာကို များ စိတ်ဆိုးရတယ်..လို့ အင်း .ဟင်းစိတ်ဆိုးလို့ ပြောတာ မဟုတ္ဘူးဟဲ့..၊ သေနာလေးရဲ့.. ဒီက သိပ်ပြီး အလိုးခံချင်လွန်းလို့ ပြောနေ တာအင်း..အေမ့..အဲ့.ဟင်း ကြည့်ပါလားလို့၊ ဟင်.လိုးတော့လို့ ပိုင်စိုးက အမှုတ်ကိစ္စကို ရပ္နား၍ အလုပ်ကိစ္စဝင်ရန် ပြင်ဆင်လေ သည်..။
ခပ်မြန်မြန်ပင် သူမ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ဖြဲလိုက်ကာ ဟပြီး ခွဲပြီးဖြစ်သွားသော ပေါင်နှစ်လုံးကြား ဒူးထောက်၍ ထိုင်လိုက်ပြီး လက်နှစ် ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားသော ဒူးကောက်ကွေးကို ပင့်၍ တွန်းတင်လိုက်သည်..။ ဒူးကောက်ကွေးမှ အထက်ပိုင်း ပေါင်တံနှစ်ချောင်း က ဘေးသို့ ကားနေရာမှ စုထောင်သွားကာ ဒူးကွေးမှ အောက် ခြေသလုံးပိုင်းသည် အောက်သို့ ညွတ်ကျနေရကား မခင်သက်၏ တင်ပါးအောက်ပိုင်းသည် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ပုံစံဖြစ်နေလေသည်..။ ပိုင်စိုးက လိင်တံထိပ်ဖူးကို မခင်သက် စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းဝ နှင့်တေ့ဆက် ဆက်နေရာ တော်တော်နှင့် မတည့်..။ စိတ်မရှည်တော့သော မမသက္က .. ဟွန်း.တကထဲမွ ..ပဲ. ဟု ခပ်ပြုံးပြုံးလေးဆို ရင်း ပိုင်စိုး လီးတံထိပ္ဖူးကို လက်ချောင်းနုနုလေးများဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ကာ သူမစောက်ခေါင်းဝနှင့် ဆက်ပေးလိုက်တော့မှ ပိုင်စိုးက တင်ပါးကို ဖိ၍ အားစိုက္ကာ နှစ်လိုက်တော့သည်..။ ဇြိဇြိ.ဇြိ.. မြည်သံပေး၍ သူ့လထစ်ကြီး နစ်ဝင်သွားသမို့ မခင်သက်တစ်ယောက် စောစောကလို မပြုံးနိုင်တော့ရှာပဲ မျက်လုံးလေးကို မှေး ပါးစပ်လေးကို ဟကာ ကာမအရသာကို ယစ်မူးခံစားနေပါတော့သည်..။
လိုးထည့်လိုက်ရသည်မှာ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလွန်းလှပါ၏။ အနမ်းအရှုပ် အမှုတ် အလျက် စုံလင်စွာဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ နှူးထား၍ နူးအိ ဖောင်းရွနေတာတောင်မှ ပိုင်စိုး လထစ်ကြီးတစ်ချောင်းလုံး ခပ္စီးစီး ခပ်ကြပ်ကြပ် ဝင်သွားရသည်..။ ရွှပ်ခနဲ လြယ္လြယ္ကူကူ ဝင်ခြင်း မဟုတ်ပါ..။ ဇိကနဲ တွန်း၍ ဝင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်..။ ရင်သားတွေ ဖင်သားတွေက ဆွေဆွေ့ထက် ထြား၍ ကားကားမို့မို့ ဖောင်း ဖောင်းကြွကြွကြီးမို့ လိုးမကောင်းလောက်ဘူး ထင်ထားခဲ့သည်မှာ မှားပြီ..။ ဆွေဆွေက မမသက်ထက် ရင်တွေ တင်တွေ နည်း နည်းငယ်သော်လည်း စောက်ဖုတ်ကမူ ထွားကြိုင်းလှချေသည်..။ မမသက်မတော့ ပြည့်တင်း အိကားသော အသားဆိုင်များ ကြောင့် စောက်ဖုတ်က ညှပ်သလို ဖြစ်နေ၍လား မသိ..။ ကြီးမားသော တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်နှင့် ဘာမျှပင် မဆိုင်..။ စီးစီးပိုင်ပိုင်ကြီး လိုး၍ ကောင်းလွန်းလောက်ရုံ အနေတော်လေး ဖြစ်နေသည်..။
ပိုင်စိုး လီးတံကြီးက ပြောယူရလောက်အောင် ကြီးမားတုတ်ခိုင်လွန်း၍လားတော့ဖြင့် မဆိုသာပါချေ..။ ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါ၏.။ ဆွေဆွေလဲ ခုမွသာပါ..။ ညားကာစကမ်ားဆို..တော်ပါတော့ဟု တားယူရလောက်အောင် သူမခမ်ာ နာကျင်စွာ အလိုးခံခဲ့ရသည်..။ အခုတော့ နေ့တိုင်းညတိုင်း ဝင်နေကျ ထွက်နေကျမို့ ဒီလီးကြီး၏ လုံးပတ်နှင့် အရှည်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိနေချေပြီ..။ မမသက္ကေ တာ့ တစ်ခါမှ မခံရေသးတဲ့ စောက်ဖုတ်မို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် မခံရတာ ကြာလို့လားတော့ မသိ လိုးရတာ ကြပ်ကြပ်သပ်သပ် ရှိလွန်း လှသည်..။ ပိုင်စိုးက အဆုံးထိ ဝင်သွားသော သူ့လီးကြီးကို ပြန်နှုတ်၊ ပြန်ထိုးလိုက်ဖြင့် အသာလေး မှေးပြီး လိုးဆောင့်နေလေ သည်..။ လိုးကြာ.အင်း ဟင်း.ခပ်သွက်သွက်လေး လိုးပေးပါနော် အင်း ဟင့်..အမေလးကောင်း . ကောင်းလိုက်တာဟုတ်ဟုတ် တယ်အင်း ဟုတ်ပြီ၊ ကျွတ်..ကျွတ်ရွီး.ရွီး.အီး အင့်..အားဆောင့်ဆောင့်. နာနာလေး ဆောင့် အေး အေးကွယ်.လိုး လိုးအားရပါးရသာ လိုးမမ စောက်ဖုတ်ကြီး ကွဲချင် ကြဲသြားပေစ အားအင်း ကျွတ်..ကျွတ်.ရွီးအားအင့် ဟင့်. ဟအားအီး.ဟီး.အ. မခင်သက်တစ် ယောက် ဟန်ဆောင်မှုတွေ တစ်ခုမကျန် ကွာကျသွားပြီး.. သူမဆန္ဒကို ဘယ္လိုမွ မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘဲ နှုတ်မှ ဖွင့်ဟရတော့၏..။
သူမ၏ မျက်နှာ အမူအယာကလည်း ရမ္မက်အခိုးအလျှံ များဖြင့် ရီဝေ တက်ကြွ၍ ထူးထူးကဲကဲ တပ်မက်ချင်စရာ လှပလွန်းနေ တော့သည်..။ မိန်မတစ်ယောက်၏ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်နေခိုက် ထိုမိန်းမ၏ မျက်နှာ၌ တွေ့ရသော အမူအယာမွာ ထိုအချိန်၌သာ တွေ့ရသည့် အလွန်ရှားပါးလှသော အလှတစ်မျိုး မဟုတ်ပါလား။ ပိုင်စိုးက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းလှသော မမသက်၏ ရမ္မက် လှိုင်းကြွ မျက်နှာပေးကို တစိမ့်စိမ့် ရှုစားရင်း ရာဂစိတ္တို့ ကြွသထက် ကြွလာကာ မမသက် အလိုက် အစွမ်းကုန် အားသွင်းပြီး ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်ပေးတော့သည်..။ ကြောင်ခံတွင်းပျက်နှင့် ဇရက်တောင်ပံကျိုးတို့ တွေ့ကြသည့်ပွဲမို့လား မသိ၊ ဖိုနှင့်မတို့ အချစ်နယ်ကျွံပြီး ကာမဂုဏ် ခံစားနေကြပုံမှာ ထိတ်လန့်စရာ ကောင်းလှတော့သည်..။ အတန်ကြာမျှ စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆောင့် ဆောင့် လိုးနေပြီးမှ ခဏရပ္ကာ မမသက်၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို ဘယ္ဖက်သို့ စောင်းပစ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမ၏ ညာဘက် ပေါင်တံကို ပင့်၍ တွန်းကပ်လိုက်ရာ စင်းထားသော ဘယ်ခြေထက်၌ အားကစား လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သလိုမျိုး ကွေး၍ တင်မြှောက်ထားသည့် ပုံစံ ဖြစ်သွား၏..။ မမသက် ပိုင်စိုး ပြင်ဆင်ပေးသမျှ ငြိမ်၍ ခံနေလိုက်သည်..။ သူ့အလိုကျ ကြွက်သားများကို ဖြေလျှော့၍ ပေး ထားလိုက်သည်..။ ကြိုက်သလိုသာ ပြင်ဆင် ၊ ကြိုက်သည့်ပုံစံဖြင့်သာ လိုးပေတော့ ကောင်ဆိုးလေးမောင်ပိုင်စိုးလေးရေ။ တစ္ဖက် သို့ စောင်းထားသည်မို့ မခင်သက်၏ ခါးက နိမ့်ဆင်းနေပြီး တင်ပါးကြီးတစ်ဖက်က ခုံး၍ ကွေးကာ မြင့်ကားနေသည်။
စူကား မို့မောက်နေသော ဖင်သားဆိုင်နှစ်မြွာက အိစက္ကာ နောက်သို့ ပစ္ထား၏။ တုတ်ခိုင်အိဖွေးသော ပေါင်တံလုံးကြီးနှစ်ခုက ပူးဆင့် နေသည်။ အရင်းပိုင်းချင်းမှာတော့ ခပ္ကြာကြာဟလို့ နေ၏။ ဘယ်ခြမ်း ပေါင်းလုံးရင်းက နောက်သို့ အနည်းငယ် ပစ္ထားကာ ညာခြမ်း ပေါင်လုံးရင်းက ရှေ့သို့ တွန်းပို့ခံထားရသမို့ ပေါင်ရင်းခွဆုံရှိ လီးနှုတ်ပြီးကာစ မမသက်၏ စောက်ဖုတ်ကြီးခမျာ စူအက်စူအက် ရွစိရွစိဖြစ်ကာ လီးကြီးဝင်လာတော့မည်ကို အဆင်သင့် စောင့်ကြိုနေဟန်ဖြင့် အသားနီများပင် လန်ထွက်တော့မလောက် မွတ်သိပ် နေရှာသည်။ ပိုင်စိုးက မမသက်၏ တင်ပါးခုံးခုံးပေါ် လက်တင်ကာ ဖင်ပြောင်ပြောင်နောက်၌ ကပ်လိုက်ပြီး အံကျဖြစ်နေသော စောက်ဖုတ်စူစူထဲသို့ ထိပ္ဖူးကို တေ့၍ နှစ်လိုက်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ လျှောကနဲ ဝင်သွားပါ၏။ အနေအထားကလည်း ပေါင်နှစ်ခြမ်း ကို ဖြဲဟထားသလိုမို့ စောက်ဖုတ်ကြီးက စူစူမို့မို့ကြီး ဖြစ်နေပါတော့သည်။ အဆုံးအထိ သွင်းထားရာမှ ဆတ္ကနဲ ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး ကျွတ်လုကျွတ်ခင် ဖြစ်မှ အားစိုက်၍ ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပြန်သည်။ တစ္စတစ္စ ဆောင့်ချက်များက ပြင်းထန်လာသည်။ သူက အားစိုက်၍ ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဆောင့်လိုက်တိုင်း မမသက်၏ အိစက်ထွားမို့သော ရင်သားကြီး နှစ်မြွာက ယမ်းခါ၍ တအိအိ ဖြစ်နေ တော့သည်။ သူမကလည်း အငြိမ်မနေပဲ တင်ကို နောက်သို့ ပစ်ပစ်ပေးရင်း ညာလက်ဖြင့် သူ့ကိုယ်လုံးကို စမ်းမိစမ်းရာ စမ်း၍ ဆိတ် ဆွဲညှစ်လိမ်ကာ အားမလိုအားမရ ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုနေသည်သို့ ရွိ၏။
ပိုင်စိုးကလည်း အိထွားကားပြန့်သော အပျိုကြီး၏ ဖင်သားဆိုင်ကြီးများနှင့် သူ့ဆီးခုံရင်းတို့ အားရွိပါးရွိ ပစ်ပစ်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ဖ တ္ခနဲ ဖတ္ခနဲ မြည်ကာ တုန္ခနဲ တုန္ခနဲ အိတက်သွားသော နူးညံ့ဝင်းဝါသည့် တင်သားဆိုင်ကြီးများကို ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ကာမစိတ် တွေ ပြင်းထန်သည်ထက် ပြင်းထန်လာသည်။ ဆောင့်ချက်ကလည်း အားပါလွန်းလှသဖြင့် ခံရသူမွာ မသက်သာပါ။ မမသက်တစ် ကိုယ်လုံးလည်း မညှာမတာ ဆွဲယမ်း၍ အလှုပ်ခံနေရသော သစ်ပင်ငယ်လေးပမာလို ဖြစ်နေရှာသည်။ မမသက်၏ နှုတ်မှ ကောင်း လွန်းလှသော ကာမစည်းစိမ်ကြောင့် တအိအိတအအညည်းသံလေးများကလည်း စည်းချက်ပမာ ထွက်ပေါ်လို့ နေပါ၏။ ပိုင်စိုးက ထွက်လုထွက်ခင်ဖြစ်နေသော သုတ္ကို ထိန်းသည့်အနေဖြင့် ဇြပ္ကနဲ အသံမြည်အောင် လီးတန်ကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ တင်းကျပ် နေအောင် ရိုက်ထားသည့် ခပ်တုတ်တုတ် စို့ကြီးတစ်ချောင်း မရှိတော့သလိုဖြစ်ကာ မမသက် စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဟာကနဲ ဖြစ်သွား ရပြီး အရှိန်မသတ်နိုင်ပဲ ပြစိပြစိ ဖြင့် ရွစိထိုးနေလေတော့သည်။ မောင်.မောင်လေး .. ပြီးချင်ပြီလား မမသက္က တုံရီဟိုက်သော အသံဖြင့် မေးလာသည်။
ဟုတ်တယ် မမသက် .. စိတ်ထဲမှာ မထိန်းနိုင်တော့လို့ ခဏနားလိုက်ရတာ ဆက်သာ လိုးနေလို့ကတော့ လေရေတြ ထွက်ကုန်တော့ မှာ ဟင့်အင်းဟင့်အင်း ထွက်ထွက် ဆောင့်သာဆောင့်ကွာ..၊ မမ အရမ်းကောင်းနေတာမောင်ရဲ့. မမသက္က မွတ်သိပ်ဆာလောင်စွာ သူမဆန္ဒတွေကို ထုတ်ဖော်လာပါသည်။ ပိုင်စိုးက . အင်းပါ မမရဒီတစ်ခါ အပေါ်ကမှောက်ပြီး အားရပါးရ လိုးမယ်လေ. အပြီးသတ်ပေါ့..မမေကာ ပြီးကာနီးပြီလား မခင်သက်က စိတ်မရှည်တော့သော အသံဖြင့် အင်း .. ဟု တစ်ခွန်းဆိုပြီးနောက် ဒီက အရမ်းကောင်းနေပြီ ဥစ္စာ၊ မင်းလီးကြီးသာ ဆက်ဆောင့်နေရင် ခုလောက်ဆို ပြီးနေရောပေါ့ လုပ်လုပ်တော့၊ စိတ်ရှိလက်ရှိသာ ဆော င့်လိုးတော့မမကို မညှာနဲ့ မမလဲ ပြီးတော့မှာ အင်းဟင့်.ဟင်းမခင်သက်က ပိုင်စိုး အလိုက် ကိုယ္ကို ပက်လက်လှန်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်း ကားကားစင်းစင်း ဖြစ်သွားအောင် အိပ်နေလိုက်သည်။ ပိုင်စိုးက မခင်သက်၏ ကိုယ်လုံးအိအိကြီးပေါ်သို့ တည့်တည့်မှောက်လိုက် ရာ သူ့လီးတန်ရှည်ကြီးက ဆီးစပ်ပေါ်ထိ မှေး၍ ပူနွေးနွေး စိုအိအိကြီး မေးတင်နေသည်။ ဟင်းလုပ်တော့လေကွယ်..လို့.မခင်သက် က မောလျစွာ ဆိုရင်း သူ့ကို ရီဝေစွာ ကြည့်နေ၏။ သူက သူမနှုတ်ခမ်းကို ခပ်ကြာကြာလေး ငုံလိုက္ကာ မှေး၍ ခေတ္တ နားနေသည်။ ပြီး မှ ခါးကိုကြွလိုက်ပြီး သူမ၏ ဖြဲကားထားသော ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့် တည့်တည့်ချိန်ကာ ထိုးထည့်လိုက် သော်လည်း ငနဲသား မောင်ရွှေလီးက ချော်ချော်ထွက်နေသည်..။
မခင်သက်က တခစ်ခစ်ဖြင့် သဘောတွေကျကာ.. လွဲနေတယ်ဟဲ့မောင်လေးရဲ့..၊ ဖယ်ဖယ်မင်းဟာကြီး မထား၊ အင်းပေးပါဟာ ကဲ..ဟုတ်..ဟုတ်ပြီထည့်လိုက်တော့ဒီအတိုင်းပဲ ထည့်လိုက်ဟုတ်တယ်အား.အိ..အီးကျွတ်..ကျွတ် ဆောင့်..ဆောင့်ကွယ် အီး ရွီး..မောင်..မောင်လေးအားဆောင့်ဆောင့်..နာ နာလေးအင်း..အ.အဲဟုတ္ပီရွီး.ကျွတ်..ကျွတ်အေမ့အင့်ဟီး..ဟင်းအား..ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ..အား.. မခင်သက်က ပိုင်စိုးလီးကြီးကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြီး သူမစောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်ပေးရင်း ခပ် ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ချက်များ၌ ယစ္မူးစြာ ရှိနေပါတော့သည်..။ ပိုင်စိုးကလည်း ဆောင့်ကောင်းကောင်းနှင့် မီးကုန်ယမ်းကုန် ပစ်ပစ် ဆောင့်တော့သည်..။ အားပါလွေသာ သူ့လိုးဆောင့်ချက်များကြောင့် မမသက္ခမ်ာ အံကိုကြိတ်ကာ မ်က္လုံးမ်ား စုံမှေးလျက် ပါးစပ်မှ တကျစ်ကျစ် တရွီးရွီး မြည်အောင် စုပ်သပ်ရင်း ခေါင်းကို ဘယ်ညာလူးပြီး သူ့ကျောပြင်ကို လက်သည်းများဖြင့် ကုတ်ခြစ်ကာ တွန့် လိန် ကော့လန်နေပါတော့သည်..။
သူမ၏ လှုပ်ရှားမှုများအရ အထွတ်အထိပ်သို့ သူမ ရောက်နေပြီဟု ပိုင်စိုး အတတ်သိလိုက်၏။ သူက မမသက်၏ နို့အုံကြီးနှစ်လုံးကို အုံအရင်းမှ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ပြီးမှ အသက္ကို ဝအောင်ရှူလိုက်ကာ ခါးကို မြှောက်ကာ ပင့်ကာ အားရွိပါး ရွိ အသားကုန်ကြုံး၍ လိုးလေတော့သည်..။ ပိုင်စိုး ဆောင့်ချက်များက အားမာန်ပါလှသလို အောက်မှနေ၍ စကောဝိုင်းမွှေ့သလို ဖင် ဆုံကြီးနှစ်ဖက်ကို လှည့်ကာ ဝိုက္ကာ စိတ်တိုင်းကျ လှုပ်၍ အလိုးခံပေးနေသော မမသက်၏ အပင့်..အရှိုက် အဟိုက်အဝေ့တို့ကလည်း မာန်ပါလှချေ၏..။ ဘာမွ မကြာလိုက်။ ပိုင်စိုး၏ လချောင်းကြီးတစ်ခုလုံး ယားကျိကျိနှင့် ကျင်တင်တင် ဖြစ်လာကာ တင်း တောင့်လာပြီး တစ္ပတ္စာ သိုလှောင်ထားခဲ့သော ဆွေဆွေ့အတွက် သုတ်ရည်တွေကို ဒေါ်လေးသက် စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထုတ်လိုက် ရတော့သည်..။ ပူနွေးစေးပျစ်သော သုတ်ရည်တို့က သူမ၏ သားအိမ်ဝကို အရှိန်ဖြင့် ပက်ဖျန်းလေပြီတကား..။ ခပ်ဝေးဝေး လမ်းမဆီမှ ကားသံ ၊ ကေလးမ်ား၏ ဆော့ကစားသံ၊ လူသံ အချို့ကို ကြားနေရ၏။ ဘာလိုလိုနှင့် ပိုင်စိုးနှင့် မခင်သက်တို့၏ ကာမ လွန်ဆွဲပွဲကြီး ဆင်နွှဲချိန်မှာ တစ်နာရီကျော်ကျော်မျှ ကြာလေသည်..။
ကြာဆို မမသက် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးချင်လာသည်အထိ စောင့်စားရ နှူးနှပ်ရတာကိုက နာရီဝက္နီးပါး ရှိခဲ့သည်ကိုး..။ စောင့်စား ရကျိုး၊ ကြိုးစားရကျိုး နပ်ပါလေ၏။ ပိုင်စိုး အိမ္က ထွက်သွားသောအခါ ၃ နာရီတောင် ထိုးလုပြီ..။ သူက မမသက္ကို အနမ်းဖြင့် နှုတ်ဆက်ကာ ခပ်သွက်သွက်ကလေး ထွက်သွားလေသည်..။ ပြီး.မမသက်၏ ဆန္ဒအရ တံခါးကို အပြင်မှ ကန့်လန့်ချသွားပေးခဲ့ သည်.။ သူမကေတာ့ မစားရတာကြာပြီ ဖြစ်သော အနှစ်သက်ဆုံးသော ကာမအဟာရကို မွတ်သိပ် ဆာလောင်နေချိန်၌ တဝကြီး စားလိုက်ရသဖြင့် အစွမ်းကုန် ကျေနပ်၍ နေလေတော့သည်..။ သို့ပေမယ့်.. ပိုင်စိုး၏ အဆုတ်အနယ် အဖိအဆောင့်တို့က တစ်ခါ ဆို ဆိုသလောက် အားပါလွန်းလှသဖြင့် လက်မောင်း၊ နို့အုံ၊ ဖင်ဆုံ၊ ခါးစပ္တို့၌ နာကျင်နေလေတော့သည်..။ အနာဆုံးနှင့် အကောင်း ဆုံးကတော့ သူမ၏ လက်ရွေးစင် စောက်ဖုတ်ကြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောဖို့ပင် လိုမည်မထင်ပါ..။ မခင်သက်တစ်ယောက် သူ အားရပါးရ လိုးပြီး ထားပစ်ခဲ့သည့် ပုံစံအတိုင်း ကိုယ္တုံးလုံး အနေအထားကြီးဖြင့်ပင် ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက် ကားယားကြီး အိပ် လျက် မှေးနေလိုက်သည်..။
တစ်ချက် မှေးခနဲ ဖြစ်သွားပြီးမှ အအေးပတ်မည်စိုး၍ ခုတင်အောက် ရောက်နေသော ခြုံစောင်ပါးပါးလေးကို ဖြစ်သလို လွှမ်းကာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပစ်လိုက်လေရာ အစာဝသွားပြီဖြစ်သော မခင်သက်တစ်ယောက် အပျိုကြီး စည်းစိမ် အပြည့်ဖြင့် ခပ်ကား ကားကြီး အိပ်ပျော်သွားလေသည်..။ အိပ်ရာကနိုးတော့ နေတော်တော်ချိုနေပြီ..။ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်လိုက်ရသဖြင့် လန်းဆန်းသွား သလို ရွိ၏။ လန်းသည်ထက် လန်းစေရန် ရေချိုးပစ်လိုက်သည်..။ သူ စွန့်ပစ်ထားခဲ့သည့် ကျိချွဲချွဲ အဖြူရည်များ ပေပွနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ လက်နှိုက်၍ သန့်စင်အောင် အထူးဂရုစိုက်လေသည်..။ တစ္ကိုယ္လုံး စိမ့်သွားအောင် လောင်းချိုးလိုက်တော့မှ လန်းဆန်းရုံမက အားပါပြည့်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်..။ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ကာမဂုဏ် ခံစားလိုက်ရသဖြင့် စိတ်ထဲမှာ အလိုလို ကျေနပ်နေသည်..။ ရေချိုး အဝတ်အစားလဲပြီး သနပ်ခါး ပါးပါးလိမ်းကာ ကြောင်အိမ်ထဲမှ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး ပျော့ပျော့နှစ်လုံးကို စားလိုက်သေး၏။ ပက်လက်ကုလားထိုင်၌ ခေတ္တ အနားယူနေစဉ် အပြင်မှ ခြေသံများကြား၍ မှောင်စပြုနေ သော အခန်းကို မီးဖွင့်လိုက်သည်..။
အင်းဒီညေတာ့ သူနဲ့ ဆွေဆွေတို့ရဲ့ ပြဲကို ကြည့်စရာ မလိုလောက်အောင် ဝသွားပြီ ဟင်း..ကောင်ဆိုးလေးနေ့ခင်းက ငါ့ကိုလိုးပြီး ညက် ငါ့တူမကို လိုးအုံးတော့မယ် ဆွေဆွေကတော့ သိရွာမွာ မဟုတ္ဘူး သိများသိရင် တော့ နောက်ဆို သူ့ယောက်ျားအိမ္ကို တစ် ယောက်ထဲ မသြားရ ဆိုပြီး တစ်ချက်လွှတ် အမိန့် ထုတ်မယ် ထင်ပါရဲ့ ဤသို့တောင်စဉ်ရေမရ တွေးနေခိုက် ကျွပ်ကျွပ်အိတ်ဖြင့် စားစရာတွေ ဆွဲပြီး ခပ်သွက်သွက် ဝင်လာသော ပိုင်စိုးကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် မခင်သက်က ဟဲ့..ဆွေဆွေ ရောဟင် အလောသုံးဆယ် ပုံစံဖြင့် မေးလိုက်ရာ သူက ပြုံးစိစိဖြင့် လက်ညှိုးကိုထောင်ကာ လီးတောင်သလို တဆတ်ဆတ် လုပ်ပြရင်း ကုလားကြီးနောက် လိုက်သွားပြီ. ဟု စလိုက်သည်..။ ဟာ.ဟုတ်ပါဘူး.ဒီကောင်လေးအကောင်းပြောတာ မခင်သက်က မှင် တည်တည် ဆိုလိုက်တော့မှ. တကထဲမမကလဲ ..ဒေါချည့်ပဲ..၊ ဖြေးဖြေးပေါ့.ပြောမှာပေါ့..မမရဲ့.. ပိုင်စိုးက လက်ထဲမှ အထုပ်တွေ ကို ကြမ်းပေါ်ပစ်ချလိုက်ကာ မခင်သက်၏ ခြေရင်း၌ ထိုင်လိုက်ပြီး ကုလားထိုင်ပေါ်၌ မှေးနေသော အပျိုကြီးကို မွှေးမွှေးပေးလိုက် သည်..။
အားအေမာကို ပြေသွားတာပဲ..မမရာ သြား.သူခိုးလေး မေးတာဖြင့် မဖြေဘူးဆွေဆွေမပါဘူးမို့လားဒါကြောင့် ..သူ အူမြူး နေ.ဟင်း. မခင်သက်ကလည်း ကြိတ်၍ ကျေနပ်နေလျက်ကပင် စိတ်ဆိုးဟန် တမင်ပြု၍ နှုတ်ခမ်းကို စူထားလိုက်လေသည်..။ ပိုင်စိုးက သူမကို ချိုင်းကြားမှ ဆွဲမထူလိုက်သည်..။ အပျိုကြီးက ပေကပ်ကပ်ပုံစံဖြင့် တင်းခံနေ၏။ သူက မရမက ဆွဲယူလိုက်ရာ မ ပါချင့်ပါချင် ပုံစံဖြင့် မတ်တတ်ကြီး ပါသွားပြီး ပိုင်စိုး ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သွားရလေသည်..။ ဟွန့်.တော်တော်ကဲ၊ ဒီကဖြင့် စောက်ဖုတ်တွေ နာလို့ကောင်းတုန်း၊ ဒါက ဘာလုပ်အုံးမလို့လဲ..၊ လိုးချင်ပြန်ပြီလားဒီလီးက မခင်သက်က ဆွေဆွေမပါမှန်း အေသအခ်ာ သိ လိုက်ရာ ကြွရွလာသော ကာမစိတ်အဟုန်ဖြင့် ညစ်တီးညစ်ပတ်လေး ခပ်ရွှင်ရွှင် ခပ်မြူးမြူး ပြောလိုက်ပြီး ပိုင်စိုး ကျောပြင်ကို တအုန်းအုန်း ထုလေတော့သည်..။ သူက တဟားဟားရယ်ရင်း သူမ၏ ကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်ထားရာမှ ရေချိုးပြီးစမို့ အေးစက်စက်ဖြင့် နွေးနေသည်ဟု ဆိုချင်စရာ ဓါတ်တစ်မျိုး စိမ့်ဝင်နေသော မမသက်၏ တင်ပါးကြီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်၍ လှိမ့် ချေ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်..။ လူဆိုးလေး ဖယ္ကြာမမ ရင်တွေ ခုန်လာပြန်ပြီခဏေလးမ်ား အမောဖြေပါအုံးတော့လား..ကြာ တက ထဲ မစားရတာ ကျနေတာပဲသြား ရေချိုးလိုက်အုံး၊ သူ့ကိုယ်ကဖြင့် ချွေးစော်တွေကို နံလို့.. ဤသို့ ဆိုကာ တွန်းလွှတ်လိုက်သည်..။
ဟဲဟဲ. မမဖုရားရဲ့ အမိန့်တော်မြတ် အတိုင်းပါပဲ.. ပိုင်စိုးက ရွှတ်တီးရွှတ်နောက် ဆိုရင်း ရေချိုးရန် ပြင်လိုက်သည်..။ ဆပ်ပြာ ၊ သဘက် စသည်ကို ယူပြီးမှ မမသက်ရှိရာသို့ တစ်ခေါက်ပြန်လာကာ. ဟဲ..ဟဲ မမဖုရားရေချိုးပြီးပြီးချင်းနော်.ဖုရာ့. ဤသို့ ပြောဆို ကာ မခင်သက်၏ အိစက်ထွားကားနေသော တင်သားဆိုင်ကြီးကို တစ်ချက် ပုတ်၍ ထွက်သွားလေတော့သည်..။ မခင်သက်ခမျာ လည်း နေ့ခင်းက စားထားဘူးသည့် ပိုင်စိုး၏ လီးအရသာကြီးကို တွေးလိုက်မိပြီး ရင်တွေခုန်၊ ဖင်တွေတုန်ကာ စောက်ဖုတ်ကြီး တစ် ခုလုံး ယားကြွလာလေတော့သတည်း။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အပြိုကွီးမခငျသကျ